စိနျစီနနျး က ခဈြဇာတျလမျး – My Blog
စိနျစီနနျး က ခဈြဇာတျလမျး
“ဦးဇယြောလငျး ရပါပီခငျဗြာ တသိနျးငါးသောငျး ရကွေညျ့ပါဦးဗြ သုံးလပွညျ့ရငျ ရှေးပါ မရှေးဖွဈလဲ အတိုးသတျပေးပါခငျဗြာ” “ကြေးဇူးပါပဲညီလေး” လူကွီး ပိုကျဆံယူပီးထှကျသှားလသေညျ။ “ဟယေ့ောငျ ဒီဒျေါတငျတငျဦးက ဘာလဲ ရှေးတာလား” “ဟုတျတယျအကိုလေးရှေးတာပါ” “အနျတီ ခနလေးစောငျ့ပေးပါခငျဗြ” စညျသူစိုး အထဲဝငျခဲ့လသေညျ။ “မမေရေေ ဒါလေး ရှေးမလို့တဲ့” “သားကလညျး ဒီမှာ ဟငျးခကျြနတောကို သားဖာသားကွညျ့လကှေယျ” “ဟငျး ကွညျ့ရတာ မကျြစိလညျပါတယျဆို မှ” “လူဆိုးလေး မမေနေဲ့ ဖဖေမေရှိရငျ မငျးဘယျလိုလုပျမလဲ” “အဲ့ခြိနျကြ သူဖာသူဖွဈပါလိမျ့မယျမမေရော” စညျသူစိုးက ဒီ တိုငျးပငျ စိတျမပါ၍ မလုပျခငျြပါဘူးဆိုက ဓားထောကျလုပျခိုငျးတောငျ အသသောခံမညျ မလုပျရေးခြာမလုပျ။ စိတျဝငျတစား လုပျ ပီဆိုလြှငျလညျး အသခေံကာ လုပျမညျ့လူစား။
ယခုလညျး ဆိုငျထိုငျခငျြသညျဆို၍ ထိုငျသညျ။ အားလုံး အကုနျပတျမလုံးစုံလုပျတတျသညျ။ ပစ်စညျးရှေးသူလာလြှငျ ပစ်စညျးရှာ တတျသညျ။ သို့သျော မိခငျဖွဈသူရှိလြှငျ မလုပျပဲ နှဲ့ဆိုးဆိုးတတျသညျ။ သူ့နာမညျက စညျသူစိုး။ အဖကေ ဦးဝငျးမောငျ ကား အရောငျးအဝယျလုပျကာ အမကေ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး အိမျနှငျ့တှဲကာ အမိနျ့ရ အပေါငျဆိုငျ ဖှငျ့ထားလသေညျ။ အတိုးနှုနျး သကျသာခွငျး၊ လုပျနညျးလုပျဟနျမှနျကနျခွငျး၊ ပေါငျနှံသူမြားအပျေါ သကျညှာခွငျးတို့ကွောငျ့ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး၏ စိနျစီနနျး အပေါငျဆိုငျသညျ နာမညျ ရကာ လုပျငနျးတှငျကယျြလသေညျ။
အကူ အလုပျသမား၂ယောကျ ချေါထားရလသေညျ။ စညျသူစိုးကား အသကျ၂၃နှဈခနျ့ရှိ ဘှဲ့ရ လူငယျ တယောကျဖွဈကာ အပြျောအပါးမမကျပဲ အလုပျစိတျဝငျစားသော အနအေထိုငျ ကဈြလဈလိမ်မာသူတယောကျဖွဈလေ သညျ။ အဖလေုပျသူက သားဖွဈသူ ကားဝယျ\_ရောငျးလုပျစခေငျြသျောလညျး သူက တတျသိနားလညျရုံ လုပျတတျရုံသာ သငျထား လသေညျ။ သူတကယျ လုပျခငျြသညျကား အမရေဲ့ အပေါငျဆိုငျလုပျငနျး။ အပေါငျဆိုငျကား လူတှလေိုအပျခကျြရှိနသေမြှ ကာလ ပတျလုံးပြောကျကှယျသှားမညျမဟုတျဟုသူကယူဆလသေညျ။
နံနကျ၆နာရီ သားမိ သားဖ ၃ယောကျလုံးထကာ Gymသှားဆော့ ပီးမှ ရခြေိုးကာ မနကျစာစားလရှေိ့သညျ။ ပီးနောကျ ၉နာရီအခြိနျ တှငျ ဦးဝငျးမောငျက ကားပှဲစားတနျးသို့ သှားကာ စညျသူစိုးနှငျ့ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးက ဆိုငျဖှငျ့လသေညျ။ ပိုကျဆံရှိ လူခမျြးသာစာရငျးဝငျ သျောလညျး ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးက အိမျမှုကိစ်စကို သူတယောကျထဲသာ နိုငျအောငျလုပျလသေညျ။ မနကျတပိုငျးလုံး စညျသူစိုးက ဆိုငျထိုငျ ကာ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးက အိမျမှုကိစ်စဗာဟီရနှငျ့ မီးဖိုခြောငျ ထမငျးဟငျးခကျြခွငျးမြားကို ပွုလုပျလသေညျ။ ခကျြပွုတျပီးစီးသညျ့အခါ ဆိုငျခနဝငျကွညျ့၍ ဦးဝငျးမောငျထမငျးစားပွနျလာသညျ့အခါ သားမိ သားဖ ၃ယောကျ ထမငျးလကျဆုံစားလရှေိ့ကွသညျ။ နလေ့ညျ ပိုငျး ဦးဝငျးမောငျ ကားပှဲစားတနျးသှားသညျ့အခါ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးက ဆိုငျထိုငျ၍ စညျသူစိုးက အပွငျအလုပျမြားရှိက ထိုအခြိနျတှငျ ထှကျလုပျလသေညျ။ ညနေ၅နာရီတှငျ ဆိုငျပိတျကာ ဦးဝငျးမောငျလညျး ပွနျရောကျလာပွီဖွဈလသေညျ။
၆နာရီတှငျ ညစာစား ကွ၍ ညစာစားပီးသျော စညျသူစိုးက ရုပျရှငျကွညျ့ခငျြလညျးကွညျ့ မကွညျ့ပါကဂိမျးဆော့ခငျြလညျးဆော့ စာဖတျခငျြလညျးဖတျ ကာ သို့မဟုတျပါက သူငယျခငျြးမြားဖွငျ့ လကျဖကျရညျဆိုငျထှကျထိုငျတတျလသေညျ။ လကျဖကျရညျဆိုငျသှားသညျ့အခေါကျမှာ ဆယျခါ့ တဈခါဖွဈလသေညျ။ ဘာပဲလုပျလုပျ ည၉နာရီထိုးလြှငျ စညျသူစိုး အိမျအရောကျပွနျလာရလသေညျ။ ည၉နာရီဆိုလြှငျ အိမျတံခါးပိတျကာ အိပျယာဝငျကွပွီဖွဈသညျ။ စညျသူစိုးတို့၏ နစေ့ဉျ နိဓ်ဓဓူဝ လုပျငနျးစဉျ ဇယားဖွဈလသေညျ။
သို့သျော ကံကွမ်မာဇာတျဆရာဟူသညျ အလှညျ့မပွောငျး အခြိုးအကှမြေ့ားဖွငျ့ လောကီလူ့ဘဝကို တနျဆာဆငျခွ ယျမှုနျးသော အလအေ့ထရှိသညျ့အတိုငျး စညျသူစိုး၏ဘဝကို တနျဆာဆငျခွယျမှုနျးခဲ့လသေညျ။ ညသနျးခေါငျယံ မရောကျတရောကျအခြိနျ စညျသူစိုး ဆီးတအားအောငျ့သဖွငျ့ လနျ့နိုးလာလသေညျ။ ညဦးပိုငျးက ရအေမြားကွီးသောကျမိလိုကျတာကို သတိရလသေညျ။ အိမျသာသှားရနျ ထကာအခနျးထဲမှထှကျခဲ့လသေညျ။ အိမျသာသှားပီး အပွနျ အဖတေို့ အခနျးရှမှေ့ အဖွတျတှငျ စကားသံမြား ကွားလိုကျရလသေညျ။ ဒီခြိနျကွီး ဘာမြား အရေးတကွီးပွောနသေလဲဟု စူးစမျးလိုစိတျဖွငျ့ အခနျးတံခါး အသာဟကာ နားထောငျ ကွညျ့လိုကျတော့… “မောငျကကှာ ဆေးသောကျတာတောငျမှ မရဘူးကှာ” “ဟာ ဖူးကလညျး ကိုယျလဲ ဆေးသောကျတာပဲကှာ အခြိနျတော့ပေးရမှာပေါ့”
“တျောစမျးပါ မောငျသာအစကထဲက ဆငျခွငျနရေငျဘာမှမဖွဈဖူး အဲ့ဆေးလိပျတှမေသောကျပါနဲ့လို့ အစောကွီးကထဲက ပွောသားပဲ တရုတျဆေးလိပျကမှ ကောငျးတာဆိုပီး နားမထောငျပဲ သောကျတာလေ” “ဒီလောကျထိဖွဈမယျ မှနျး မောငျလဲမထငျမိလို့ပါကှယျ ဆရာဝနျကတော့ လုံးဝ ပနျးသတော မဟုတျလို့ မြှျောလငျ့ခကျြရှိနသေေးတယျလို့ပွောတယျလေ ဖူးရဲ့” “မြှျောလငျ့နတောကလညျး ၆လတောငျရှိနပေီ ဘယျတော့မှ ပွနျကောငျးမှာလညျး ဖူးလဲသှေးသားနဲ့ပါမောငျရယျ ဖူးလေ တခါ တလေ မနနေိုငျမထိုငျနိုငျဖွဈမိတယျ မောငျ” “အေးပါမောငျကွိုးစားပါ့မယျကှာ ခုတော့ ဒီအတုလေးနဲ့ ပွုစုပီးတာလေးပဲကနြေပျ လိုကျပါကှာ” “ဟငျး ပွောလိုကျရငျဒီလိုခညျြးပဲ ဖယျ ရသှေားဆေးဦးမယျ” ဟုဆိုကာ ထှကျလာသော မိခငျဖွဈသူ မွငျမှာစိုး၍ မှောငျရိပျတှငျ အသာလေး ကှယျနလေိုကျရလသေညျ။
စညျသူစိုး သိလိုကျရသော အဖွဈအပကျြမြား အပျေါ စိတျရှုပျသှားမိလသေညျ။ ဖခငျဖွဈသူကိုလညျး အပွဈမတငျရကျ မိခငျကို လညျး မညျသို့ ကူညီရမလဲဆိုတာ မစဉျးစားတတျအောငျဖွဈလသေညျ။ နောကျနေ့ မနကျမှစ၍ စညျသူစိုးသညျ မိခငျဖွဈသူအား သတိထားစောငျ့ကွညျ့မိလသေညျ။ အကူချေါထားသော ကောငျလေးမြား ဖွဈသော အောငျမငျးနှငျ့ သိနျးစိုးတို့ ၂ယောကျမှ သိနျးစိုး အား လိုတာထကျပို၍ အရောတဝငျနနေကွေောငျး တှရေ့လသေညျ။ စညျသူစိုးမှာ ပို၍ စိတျမခမျြးမသာ ဖွဈမိလသေညျ။ သိနျစိုး ကား သူနှငျ့ရှယျတူဖွဈကာ သူလိုပငျ အသားဖွူ ဖွူ မေးရိုးခိုငျခိုငျ နှာတံပျေါပျေါ နှငျ့ သှယျလလြ ကိုယျဟနျရှိလသေညျ။ ခါးသိမျ သိမျ တငျပါးကဈြကဈြနှငျ့ တောငျ့တငျးသောပါငျတံမြားက အလိုးအဆောငျးကောငျးသော ယောကျြားကောငျးဖွဈကွောငျး ဖျောပွ နသေော လက်ခဏာမြားဖွဈလသေညျ။
မိခငျဖွဈသူ ဘယျခွလှေမျး လှမျးတော့မညျဆိုတာ သိနသေော စညျသူစိုးသညျ မညျကဲ့သို့ တားဆီးရမညျကို အကွံအိုကျလကျြရှိလသေညျ။ ဆိုငျသိမျး ညစာစားပီးသောအခါ စိတျညဈညဈနှငျ့ လကျဖကျရညျဆိုငျသို့ ထှကျ လာခဲ့လသေညျ။ “ဟေ့ စညျသူ ပြောကျလှခလြေား ခုမှပျေါလာတယျ ဘာသောကျမှာလဲ ညီးလေးရေ မှာမယျဟေ့” “ညီလေး Speed တဘူးယူခဲ့ သံဘူးနျော” “ဟုတျကဲ့ပါခငျဗြ” “ကိုစိုးမိုး မတှတေ့ာတောငျ အတျောကွာပီဗြာ” “မငျးက လာမှမလာပဲကိုး မငျး ဇကျပွာဖှငျ့လိုကျ စာအုပျအသဈတှေ ဒေါငျးထားတာရှိတယျ ကူးသှားတော့ မငျးလဲ Facebook သုံးပါဆိုတာကို ပွောရမဘူး ကှာ” “ကနြျောက စှဲမိရငျ နရေ့ောညပါ သုံးမိမှာ ဒါကွောငျ့ပါ ကိုစိုးမိုးရ” “အေးပါကှာ စညျသူ မငျးကွညျ့ရတာ သိပျမလနျးဘူးကှာ ဘာတှညေဈနလေဲ” “ဘျောဒါ တယောကျပါဗြာ ပနျးသသေလိုဖွဈနတော ၆လလောကျရှိပီဗြာ ဘယျလိုကူညီရမလဲစဉျးစားနတော” “မငျးကတော့ကှာ ဘယျသူ့မဆို ကူညီခငျြတဲ့ကောငျပဲကှာ ငါသိသလောကျပွောမယျဆို အဲ့ဒါမြိုးက အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဖွဈတာကှ ဘာတှလေုပျမိလဲဆိုတာသိမှ ကုသရလှယျတာကှ”
“တရုတျဆေးလိပျ ပိနျပိနျလေးတှလေေ ပူရှိနျးဆေးလိပျတှေ သောကျတာအကိုရဲ့” “အငျး ဒီခှေးတရုတျတှကေ သူတို့ဆီလူမြားတိုငျး လြော့ခဖြို့ဆိုပီး သခြော ပနျးသတေဲ့ ဆေးတှရေောပီးထုတျ တာ ခှေးမြိုးတှေ လူကို ဥပါဒျဖွဈအောငျလုပျတာ မငျးဘျောဒါကို တတျနိုငျရငျ လုံးဝ ဆေးလိပျဖွတျ ခိုငျးလိုကျ ဆေးရှကျကွီးက ပနျးသစေပေါတယျဆို ခှေးမြိုးတှေ ထုတျတဲ့ဟာမှ သှားသောကျတော့ပိုဆိုးမှာပေါ့” “ဟုတျတယျကိုကွီးရာ သူကလဲ တနေ့ ဆယျ လိပျလောကျသောကျတာ” “မသောကျပလစေ့နေဲ့ အိပျရေးဝဝအိပျ ဖီးကွမျးငှကျပြောသီး မီးဖုတျတို့ ရှနေီငှကျပြောသီးတို့စားပေး စိတျဖိစီးမှုမရှိအောငျနေ စိုးရိမျစိတျမဝငျအောငျနေ အဲ့ဒါဆို ပွနျကောငျးလာမှာပါကှ” “ဟုတျကဲ့ပါ ကိုကွီး ခုလိုရှငျးပွပေးတာ ကြေးဇူးပါဗြာ” “မလိုပါဘူးကှာ ဒါပမေဲ့ မငျးဘျောဒါရဲ့ မိနျးမအတှကျတော့ စိုးရိမျတယျကှာ မိနျးမတှကေ လိငျမဆကျဆံပဲနနေိုငျတာ သုံးလပဲကှ သုံးလကြျောရငျ သှေးသားဆန်ဒကိုက တောငျးလာတာ အဲ့ဒါကိုတော့ ဂရုတစိုကျဖွပေေးပေါ့ သူ့ကိုနားလညျအောငျပွော ပွခိုငျးပေါ့” စညျသူစိုး ခေါငျးထဲ အခကျြပေးခေါငျးလောငျသံမြားဆူညံသှားလသေညျ။
သိနျးစိုးကို မိခငျဖွဈသူက ရလောမွောငျးပေးနပေီ။ ကိုယျ့ဝမျးနာ ကိုယျသာသိ ဖခငျဖွဈသူကို ဘယျလိုပွောပွရပါ့မလဲ မိမိသိသညျဆိုလြှငျကော ဖခငျဖွဈသူ က ရှကျသှားလမေညျလား။ ကိုစိုးမိုး နောကျဆုံးစကားက သူ့ကို ပိုပီးဖိအားမြားလာစသေညျ။ကိုစိုးမိုးဆိုတာက သူ့ သူငယျခငျြးရဲ့ အကို လကျရှိ ဖဘေု့တျပျေါမှာ အပွာစာအုပျမြား မြှဝပေေးနသေောသူဖွဈလသေညျ။ သူက ဖဘေု့တျမသုံး gmail လြှောကျရုံဖွငျ့မ ရ Code ပွနျရိုကျရ စိတျမထငျလြှငျ အကောငျ့ပိတျခံရသော ဖဘေု့တျကို ဇယားရှုပျသညျဟု ထငျမွငျမိလသေညျ။ အဲ့ဒီတော့ 18+စာအုပျကွိုကျသောသူ့အတှကျ ကိုစိုးမိုးက PDFရှိသော စာအုပျမြား ဒေါငျထားကာ သူလာလြှငျ ကူးထဲ့ပေးလရှေိ့လသေညျ။ စိတျပွလေကျပြောကျ လကျဖကျရညျဆိုငျထှကျလာကာမှ ပိုပီး စိတျညဈလာသဖွငျ့ ကိုစိုးမိုးကို နှုတျဆကျကာ ပွနျလာခဲ့လသေညျ။
အိမျသို့ပွနျရောကျသျော စိတျညဈစရာမြားမထေ့ားကာ ကိုစိုးမိုးပေးလိုကျသော Pdfမြားကိုဖှငျ့ဖတျကွညျ့လသေညျ။ ၁၀ပုဒျခနျ့ရှိလေ သညျ။ ပထမဆုံးဖတျမိသညျက ထူးခွားရေးသား၍ တိတျတခိုးမှ တငျဆကျသညျ့ “အရခွေုံ” ဆိုသော စာအုပျဖွဈလသေညျ။ စ ဖတျမိသညျမှစ၍ လကျကမခခြငျြအောငျကောငျးလှနျးကာ သှေးရငျးသားရငျး လိငျဆကျဆံသော စာအုပျဖွဈလသေညျ။ အကွိုကျ ဆုံးကား ခိုငျလေးနှငျ့ သူ့သားဖိုကျသော နောကျဆုံးအခနျးဖွဈလသေညျ။ ထိုအခနျးကို ၃ခါ ၄ခါလောကျ ပွနျဖတျမိလသေညျ။ နောကျထပျတအုပျ ဖတျမိသောအခါ အကာမငျး ရေးသားသော “အမနေဲ့သားရဲ့ လကျထပျပှဲ” စာအုပျဖွဈလသေညျ။ အဖကေ ပွသ နာရှိ၍ သားက အမကေို ဝငျရောကျထိနျးသိမျးသော ဇာတျလမျးဖွဈကာ သူနှငျ့တူနသေညျကိုလညျးသတိပွုမိလသေညျ။ နောကျထပျတှရေ့သညျကား ကာမလူဆိုး ချေါ ကိုစညျ ရေးသားသော “ဟကျပီးဗယျလငျတိုငျးဒေး” ဆိုသော စာအုပျဖွဈလသေညျ။
ဗယျလငျတိုငျးဒေးအကွာငျးကို ရိုမနျတဈဆနျဆနျ ရေးသားထားလသေညျ။ စညျသူစိုး စာအုပျမြားဖတျပီးနောကျ အတိုငျးမသိ ပြျော ရှငျသှားလသေညျ။ လပေငျခြှနျလိုကျမိလသေညျ။ Pdfပေးသော ကိုစိုးမိုးနဲ့ စာရေးဆရာအပေါငျး ကနျြးမာ ခမျြးသာပီး ကာမသိဒ်ဒိ၊ ပီ ယသိဒ်ဒိ၊ လာဘသိဒ်ဒိအပါအဝငျ အလုံးစုံသော သိဒ်ဒိမြားရပါစကွေောငျးဆုတောငျးပေးလိုကျမိလသေညျ။ (ကနြျောလညျး တကယျ ဆုတောငျးပါတယျ ခိခိ / ပုံ – မွသာ) ဝိုငျးစကျသောမကျြလုံးတစုံ ထူထဲသောနှုတျခမျး ဖွောငျ့စငျးသောနှာတံပျေါပျေါတို့က ရုပျရှငျမငျးသမီးခြော စမိုငျးနှငျ့ပုံစံတူကာ ကော့ခြှနျနသေော ရငျသားမြား စှငျ့ကားဝိုငျးစကျပွီး အနောကျဖကျကို ကောကျထှကျနေ သော တငျသားမြားသညျ မိခငျဖွဈသူ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး၏ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အလှပတရားမြားကို ဖျောပွနသေော အရာမြားဖွဈလေ သညျ။ ထိုအလှတရားမြားကို အဖေ မသုံးဆောငျနိုငျပါက သူသုံးဆောငျမညျဖွဈလသေညျ။
အပွငျလူ ဘယျသူ့လကျကိုမှအပါမခံနိုငျ ဖိတျခငျြးဖိတျ ကိုယျ့အိတျထဲသာဖိတျရမညျဟု ဆုံးဖွတျမိလသေညျ။ မနကျဆိုငျဖှငျ့ပီးသောအခါ လူပါးသောအခြိနျတှငျ စညျသူ စိုး အိမျနောကျမီးဖိုခြောငျသို့ အသာဝငျလာခဲ့လသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး ခကျြပွုတျနရောသို့ အသာနောကျမှ ဝငျရပျ၍ တောငျအောငျ အသငျ့လုပျထားသော သူ့လီးကွီးဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူ ဖငျကွားသို့ခြိနျကာ ထောကျ၍ သိုငျးဖကျလိုကျလသေညျ။ “မမေေ ဘာတှခေကျြ နတောလညျး” “အိုဟဲ့ ဒီကလေးဟာလေ အလနျ့တကွား လှတျလကှေယျ” “လှတျဘူး သားမေးတာ မဖွရေငျလှတျဘူး” စညျသူ စိုးသညျ ရံဖနျရံခါ ထိုကဲ့သို့ကပျခြှဲနကွေ။ သို့သျော ယခုကား ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ အစပထမလနျ့သှားသျောလညျး မိမိဖငျကွားသို့ အ မွှောငျးလိုကျထောကျလာသော သားဖွဈသူ၏တောငျနသော လီးကွီးကို သတိထားမိသောအခါ ရငျထဲဝယျ တဒိနျးဒိနျးတုနျလှုပျသှား လသေညျ။
၆လကွျောတောငျ့တနသေော သှေးသားတို့က ဖိုသဘာဝအထိအတှကေို့ ရရှိသဖွငျ့ လှုပျရှားစပွုလာသလို ဦးနှောကျ အသိစိတျကလညျး မသငျ့တျောကွောငျးအသိဝငျလာသညျနှငျ့ ရုနျးထှကျလိုကျလသေညျ။ စညျသူစိုးက အသာလှတျပေးကာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျဖွဈသှားသောအခါမှ ခါးကနကေိုငျ၍ အသာစှဲကပျကာ ဖကျထားလိုကျလသေညျ။ စညျသူစိုး၏ လီးနှငျ့ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ ဖူး၏ စောကျပတျကား ကှကျတိထပျတူကကြာ ဖိကပျမိလသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးကား စောကျပတျထဲမှလညျးဆဈခနဲ့ အရမြေားစိမျ့ လာလသေညျ။ ထို့ပွငျစညျသူစိုးကား ဒီတိုငျးအငွိမျမနေ မကျြနှာအနှံ့ ငွငျသာစှာ နမျးရှိုကျလာသောအခါ အထိအတှကေို့ ယဈမူး သာယာလာလသေညျ။ ပြောကျလုနီးနီးဖွဈနသေော အသိစိတျကို ပွနျထိနျးကာ ရုနျးထှကျလိုကျလသေညျ။ စညျသူစိုးကား ပွနျမ လှတျသေးပဲ… “ဟငျး မမေကေလညျး သားကခဈြလို့နမျးတာကို” ဟုဆိုကာ အမွှောငျးလိုကျကပျနသေော သူ့လီးနှငျ့ စောကျဖုတျ ကို အထကျအောကျ ပှတျဆှဲပေးလသေညျ။
မသိစိတျကသာယာပီး ရမကျသှေးသားတို့က ကွိုကျနှဈသကျနသေျောလညျး အသိစိတျ က ကောငျးကောငျး သတိရှိနသေညျ့ ဒီတခါတော့ သတိတရဖွငျ့ငွငျးဆနျကာ… “ဒီကလေးဟာလေ လှတျဦး” ဟုဆိုကာ အတငျး ရုနျးထှကျလိုကျလသေညျ။ စညျသူစိုးကလညျးလှတျပေးလိုကျလသေညျ။ “မမေကေလဲ ဘာဟငျးလဲမေးတာကိုး” “ကွကျသား ပွုတျကွျော မုံလာဥလခဉျြရညျဟငျး ငရုပျသီးထောငျး ဒါပဲလေ သှားတော့ လူက အလုပျရှုပျနတေဲ့ဟာကို ဆိုငျကောငျးကောငျးမ ကွညျ့ဘူး” “သိခငျြလို့မေးတာကိုး မမေကေ ဒီတိုငျးပဲ သှားပီ” အပျေါစီးက ဖိဟောကျကာ မောငျးထုတျလိုကျလသေညျ။ တ ဒိနျးဒိနျးခုနျနသေော ရငျဘတျကိုဖိရငျး ခွတေုနျလကျတုနျ စိတျလှုပျရှားစှာဖွငျ့ ရခေဲသတ်ေတာထဲမှ ရကေိုယူသောကျလိုကျရလသေညျ။ လာထောကျထားသညျ့ စညျသူစိုး လီးကွီးက နဲနဲနောနောမဟုတျ သူအဖထေကျပငျကွီးလိမျ့မညျဖွဈလသေညျ။
ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးဟု အမြားက ဒျေါတပျချေါနကွေသျောလညျး တကယျတနျး အသကျအားဖွငျ့ လေးဆယျကြျောရုံလေးသာရှိလသေညျ။ သူရဲ့ ဝိုငျးစကျသောမကျြလုံးတစုံ ထူထဲသောနှုတျခမျး ဖွောငျ့စငျးသောနှာတံပျေါပျေါတို့က ရုပျရှငျမငျးသမီးခြော စမိုငျးနှငျ့ပုံစံတူကာ ကော့ခြှနျနသေော ရငျသားမြား စှငျ့ကားဝိုငျးစကျပွီး အနောကျဖကျကို ကောကျထှကျနသေော တငျသားမြားကွောငျ့ တက်ကသိုလျတုနျး ကထဲက လူသိမြားခဲ့သူဖွဈလသေညျ။ သို့သျော မိဘမြား၏ အုပျထိနျးမှုကောငျးခွငျးကွောငျ့ ရညျးစားသနာ မထားဖူးပေ။ ကြောငျး ပီးပီးခငျြးမှာပငျ သူ့ထကျ ဆယျငါးနှဈခနျ့ကွီးသော ဦးဝငျးမောငျနှငျ့ လူကွီးခငျြးသဘောတူကာ ပေးစားခဲ့လသေညျ။ ဦးဝငျးမောငျက အသကျသာကွီးသျောလညျး ခတျေမှီ ပှငျ့လငျးကာ လူငယျဆနျသူဖွဈလသေညျ။ ငယျစဉျကထဲက အားကစားကို ဂရုတစိုကျ လုပျလရှေိ့သူဖွဈလသေညျ။ ဝငျ့ဝငျ့ဖူးနှငျ့ရသောအခါတှငျလညျး ဝငျ့ဝငျ့ဖူးကိုပါ အားကစားလုပျစလေသေညျ။ လိငျဆကျဆံရာတှငျ လညျး တလမျးသှားရိုးရိုးမဟုတျပဲ ပုံသဏ်ဌာနျ အမြိုးမြိုးဖွငျ့ ဆကျဆံလရှေိ့လသေညျ။
လိငျဆကျဆံမှုဆိုတာ ဘာမှနျး ကောငျးကောငျးမသိသော ဝငျ့ဝငျ့ဖူးသညျ ဦးဝငျးမောငျနှငျ့တှမှေ့ တငျးပွညျ့ကပျြပွညျ့ ခံစားရပီး ကာမဗဒေပညာရပျတှငျ တျောတျောမြားမြား သိရှိနားလညျလာလသေညျ။ သို့သျော ဦးဝငျးမောငျသညျ ဆေးလိပျကို မကောငျးမှနျးသိသိဖွငျ့ နှဈသကျစှာ သောကျသုံးလသေညျ။ ရိုးရိုးစီးကရကျမှ တဆငျ့ တရုတျဆေးလိပျဖွဈသော စီးရကျပိနျပိနျရှညျရှညျလေးမြားကို ပွောငျးသောကျ လသေညျ။ အဆိုပါ စီးကရကျမြားတှငျ ပရုပျပါသဖွငျ့ ပူရှိနျသောအရသာပါရလသေညျ။ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးမှာ ဦးဝငျးမောငျတ ယောကျ ပနျးညိုးလာခွငျးဖွဈလသေညျ။ အစပထမ၌ တာတာနာဖီးလျပါဝငျသော ယောကျြားအားဆေးမြား သုံးစှဲရာ အဆငျပွမှေုရှိ သျောလညျး ဆေးလိပျသောကျသုံးမှု မလြော့သောအခါ လုံးဝ ပနျးသသေလိုဖွဈသှားလသေညျ။ ဆရာဝနျနှငျ့ပွသရာတှငျ ထိုအခြိနျ မှ ဦးဝငျးမောငျမှာ ဆေးလိပျကို လြော့သောကျရငျးဖွတျလသေညျ။ လုံးဝပနျးသသေလိုဖွဈသညျမှာ ခွောကျလခနျ့ရှိပီဖွဈပီး ဝငျ့ဝငျ့ ဖူးမှာ လိငျမဆကျဆံရသညျမှာ ခွောကျလခနျ့ရှိပီဖွဈလသေညျ။ ဦးဝငျးမောငျကတော့ ဇနီးဖွဈသူ အသာပွစေရေနျ လီးတုနဲ့ ထဲ့ပေး ပါသျောလညျး အစဈလောကျ မကောငျး ဆန်ဒရမကျကို မပွပြေောကျစနေိုငျကွောငျး ဝငျ့ဝငျ့ဖူးသာလြှငျ ခံစားသိရှိပသေညျ။ အခု ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ အသိနှငျ့ ဆန်ဒလှနျဆှဲနမှေုကို အလူးအလဲခံစားနရေလသေညျ။
သားဖွဈသူ စညျသူစိုး၏ အထောကျ အပှတျမြားတှငျ သာယာစိတျကတဖကျ လူ့ဘောငျ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးက လကျခံနိုငျခွငျးမရှိသော သားနှငျ့မအေ ကာမဆကျဆံသော ဖောကျပွနျ မှုကွီးကို ကြူးလှနျရနျမသငျ့ဟူသော အသိတရားတို့ကတဖကျ လှနျဆှဲနလေသေညျ။ ထိုကဲ့သို့လှနျဆှဲကာ မသငျ့တျောဟု ကိုယျ့ကို ကိုယျသတိပေးထိနျးခြုပျပါသျောလညျး သှေးသားဆန်ဒဟူသညျကား ထိနျးလေ လှတျလဖွေဈသော သဘာဝအတိုငျး ထူးခွားသော လိုလားတောငျ့တခွငျး တမြိုးကလဲ ပေါကျဖှားလာလသေညျ။ ခိုးစားရသော အသီးက ပိုခြိုသညျဆိုသညျ့အတိုငျး လူလောက အဖွူ ရောငျစညျးလေးကို ပါးပါးလေးဖွတျကြျောကာ သားဖွဈသူနှငျ့ ခဈြပှဲဝငျကွညျ့လြှငျ ကွုံတှရေ့မညျ့ အပွာရောငျ စိတျလှုပျရှား စရာ ပြျောရှငျမှု အထိအတှေ့ အရသာမြား စိတျကနြေပျစရာ ပွီးဆုံးမှု ခံစားခကျြမြားကို တှကွေုံ့ခံစားလိုသော တောငျ့တမှု ခဉျြခွငျး လဲတကျလာလသေညျ။ အစက ဒီလိုဘာလို့လုပျသလဲ။ သူ့အဖပေနျးသနေတောကို သိသှားလို့လား။ ဒါမှမဟုတျ မိမိက သိနျးစိုးကို ရလောမွောငျးပေးနတောကိုသိသှားသလား။
ဒါမှမဟုတျ တကယျပဲမိမိကို ၅၂၈ထကျပိုပီးခဈြလို့လား ဆိုသော အတှေးမြားဖွငျ့ စဉျးစားခနျးဝငျမိသျောလညျး သှေးသား တောငျးဆိုမှုယငျးကပျလာခြိနျတှငျ အပွာရောငျစိတျကူးမြားကလှဲ၍ ကနျြတာ အတှေးထဲ မ ဝငျတော့ခြေ။ ထိုနတေ့နလေုံ့း ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးသညျ စညျသူစိုးကိုရှောငျနတေော့လသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ အလုပျကိုလုပျနရေ သျောလညျး စိတျက သားဖွဈသူ စညျသူစိုး အကွောငျးသာတှေးနမေိလသေညျ။ စညျသူစိုး ထပျလာမညျလားဟု မြှျောမိသျောလညျး စညျသူစိုးကို မတှရေ့တော့ပေ။ ဦးဝငျးမောငျလညျး ထမငျးစား ပွနျရောကျလာလသေညျ။ ဒီတခါတှငျတော့ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးသညျ စညျ သူစိုးနှငျ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျရမညျကို အပြို ဖွနျးလေးတဈဦးနှယျ ရှကျရှံ့စိတျလှုပျရှားနလေသေညျ။ သို့သျော သူ၏ စိတျခံစားမှုမြားကို မပျေါပေါကျစရေနျ မကျြနှာတငျးကာ ထိနျးခြုပျထားလသေညျ။ စညျသူစိုးမှာ ထမငျးစားရနျ စားပှဲတှငျ ထိုငျမိသောအခါ မိခငျဖွဈ သူ၏ မကျြနှာထားကိုတှရေ့သောအခါ လနျ့သှားလသေညျ။
အခွအေနမှော မိမိအတှကျကောငျးနိုငျသော အလားအလာမရှိတော့ဟု မှတျခကျြပွု သုံးသပျကာ စိတျဓာတျကဆြငျးသှားလသေညျ။ သူကွိုးပမျးစီစဉျထားသမြှ သဲထဲရသှေနျ ဖွဈတော့မညျကို နှမွောမိ လသေညျ။ သို့သျော တဆတျဆတျ တုနျနသေော မိခငျဖွဈသူ၏ ထမငျးပှဲခူးနသေညျ့ တုနျယငျနသေော လကျအစုံကိုတှရေ့ သောအခါ အတိုငျးမသိ ဝမျးသာပြျောရှငျသှားလသေညျ။ ဟနျဆောငျ မကျြနှာတငျးထားသျောလညျး စိတျလှုပျရှားနသေညျကို လကျ တစုံက ဖျောပွနသေညျ မဟုတျပါလား။ ထိုကွောငျ့ တဆငျ့ထပျတကျဖို့ စဉျးစားမိလသေညျ။ ထိုကွောငျ့ ထမငျးစားနစေဉျ ဖိနပျကို အသာခြှတျကာ ခွထေောကျဆနျ့တနျးလကျြ မကျြနှာခငျြးဆိုငျရှိ မိခငျဖွဈသူ၏ ခွကေငျြးဝတျ ထမိနျထဲသို့ မှနျး၍ သူ့ခွထေောကျ တဖကျကို ထဲ့လိုကျလသေညျ။ ထိုငျခုံခငျြးလဲ နီးသဖွငျ့ ကှကျတိရောကျလသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ ဘာမြားဖွဈမလဲဟု ရငျခုနျ မြှျောလငျ့နစေဉျ ရုတျတရကျ ရောကျလာသော ခွထေောကျ တဖကျကွောငျ့ လနျ့ကာ အျောမိမတတျ ဖွဈသှားသျောလညျး သတိ ခကျြခငျြးဝငျကာ ထိနျးလိုကျလသေညျ။
စညျသူစိုး၏ ခွထေောကျက အတငျ့ရဲစှာ အထကျသို့ တရှရှေ့တေ့ကျလာသဖွငျ့ ရှိမဲ့စုမဲ့ အသိတရားလေးဖွငျ့ ထိနျးကာ တကျလာနသေော ခွထေောကျကို မိမိခွနှေဈဖကျဖွငျ့ ညှပျ၍ ထိနျးလသေညျ။ စညျသူစိုးက သူ့ ခွထေောကျကို ရုနျးကာ အထကျသို့ တိုးလရော ပေါငျခွံအတှငျးသို့ ရောကျလသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ တခုခုကို မြှျောလငျ့ထား သျောလညျး သညျလို အခွအေနကေိုယောငျလို့တောငျမှ အိပျမကျထဲထဲ့ မ မကျဖူးပါခြေ။ လငျယောကျြား တယောကျလုံးဘေးမှာ ငုတျတုပျထားကာ သားအရငျးဖွဈသူ၏ လကျရဲဇကျရဲ စောကျပတျ အနိုကျခံရသော ခံစားမှုမှာ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးအတှကျ ထမငျးစားရသေောကျလို နစေ့ဉျကွုံတှနေ့ရေသော ကိစ်စမြိုး မဟုတျပါ။ စားပှဲခငျး အရှညျဖွဈပီး ထိုငျနသေူ ရငျဘတျအောကျပိုငျးကို ပဲ အခငျြးခငျြး မွငျရသောကွောငျ့သာ တျောတော့သညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ အသံမထှကျမိအောငျ သတိဖွငျ့ထိနျး၍ အရေ တောကျတောကျကကြာ ကာမဆိပျမြားတကျလာလသေညျ။ ဦးဝငျးမောငျကတော့ သတိပွုမိပုံမရ။
စညျသူစိုးက ပိုငျနိုငျစှာပငျ ခွေ ခြောငျကလေးမြားဖွငျ့ကလိပေးနရော ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ လငျမသိအောငျ ခိုးစားရသော အရသာကို ခံစားရငျး အကောငျးကွီးကောငျး ကာ ပီးလုလုပငျဖွဈလာလသေညျ။ ဒါကိုသတိထားမိသော စညျသူစိုးက ခပျကွမျးကွမျး ပှတျပေးလရော ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ အသံထှကျမညီးညူ မိစရေနျ နှုတျခမျးကိုကျအံကွိတျရငျး တခြီပွညျ့ပွညျ့ဝဝပငျပီးသှားလသေညျ။ “ဖူး နမေကောငျးဘူးလား ထမငျးသိပျမစားသလိုပဲ” “မဟုတျပါဘူး သိပျမဆာသေးလို့ပါမောငျ” “အငျး မောငျဒီနေ့ စောစောပွနျသှားရမယျ ဟိုမှာ ဈေးဆိုငျ နတေယျ” “ရတယျ စားပီးသှားတော့လေ မောငျရဲ့” “အေးအေး သှားတော့မယျ” “သားမငျးလဲစားပီး ထားခဲ့လိုကျတော့ ဆိုငျကို ဂရုစိုကျ ဟို၂ကောငျနဲ့ လှတျမထားနဲ့ မမေကေ သိပျကွညျ့နိုငျတာမဟုတျဖူး” “ဟုတျကဲ့ပါ မမေေ” ဟုဆိုကာ စညျသူစိုးမှာ မသိခငျြ ယောငျဆောငျကာ ဆိုငျရှသေို့ထှကျလာခဲ့လသေညျ။
ထိုနမှေ့စ၍ စညျသူစိုးသညျ နတေို့ငျး ခကျြပွုတျနသေော အခြိနျတှငျ ထောကျ ပေးခွငျး၊ ထမငျးစားခြိနျတိုငျး ခွထေောကျဖွငျ့ပီးအောငျ ပှတျပေးခွငျးမြားကို အခြိနျမှနျမှနျ မပကျြမကှကျ လုပျဆောငျပေးလေ သညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ အသဈအဆနျး ကာမခံစားမှုမြားကို ခံစားနရေသောကွောငျ့ ဆာလောငျနသေော ရမ်မကျစိတျမြား ပွပြေောကျသလိုလိုရှိလသေညျ။ တပတျပွညျ့သောနတှေ့ငျ စညျသူစိုးသညျ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးအား ရှောငျနလေတေော့သညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ ဖူးမှာ ခကျြပွုတျနသေောအခြိနျ စညျသူစိုး မလာသောအခါ “ဘာလုပျဦးမညျလဲ” ဟုတှေးက ရငျခုနျမိလသေညျ။ စညျသူစိုးကား ထမငျးစားခြိနျတှငျ ဦးဝငျးမောငျနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျထိုငျကာ ဘာမှမသိသလိုပငျ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးအား လှညျ့မြှပငျ မကွညျ့ပဲ ထမငျးကို ခပျသှကျသှကျစားကာ ထှကျသှားလသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ စောငျ့မြှျောနသေျောလညျး စညျသူစိုးမှာ လုံးဝရှောငျနတေော့လေ သညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူမှာ စိတျထဲတှငျ မရိုးမယှ ဖွဈလာလသေညျ။ တခုခုလိုအပျနသေလိုလို လှမျးသလိုလို ဆှေးသလိုလို ဝဒေနာတ ရပျကိုလဲ ခံစားရလသေညျ။သုံးရကျမွောကျသောနေ့ ခကျြပွုတျနသေော အခြိနျတှငျ “သားရေ သား ခနလောကျလာပါဦး” ဟု အျောချေါလိုကျလသေညျ။
စညျသူစိုးလဲ ဆိုငျလူရှငျးနသေညျမို့ ကွညျ့နသေော အောကားကို ပိတျကာ အမဘောမြား ဖွဈလိုလဲ ဟူသော အတှေးဖွငျ့ နောကျဖေးမီးဖိုခနျးသို့ ဝငျလာခဲ့လသေညျ။ အောကျက ညီတျောမောငျက ဒေါသကွီးကာ ခေါငျးတထောငျ ထောငျနှငျ့။ မီးဖိုခနျးရောကျသောအခါ စညျသူစိုး ခနငေးမောသှားရလသေညျ။ ခဲရောငျ အကငြ်္ီလကျပွတျလေးနှငျ့ ခညျြသား ဘောငျးဘီအပှ အနကျရောငျကို ဝတျဆငျထားသော အမမှော Apronသာ ဖယျလိုကျပါက စတိုငျကကြမြိုကျသှားမညျမှာ သခြောလှ ပါသညျ။ နှုတျခမျးမှာလညျး ပနျးရောငျဖြော့ဖြော့လေးဆိုထားသဖွငျ့ စိုလကျကာ မွငျရသော သူ့ရငျကို ဗလောငျဆူစပေါသညျ။ အ မကေ နူးညံ့သော အပွုံးလေးပွုံးလကျြ “သားက ဒီရကျပိုငျး အမကေို့ ရှောငျဖယျ ရှောငျဖယျ လုပျနတော စိတျဆိုးနလေို့လားကှယျ” “မဆိုးပါဘူး အမရေဲ့ သားက အမကေို့ ဘာလို့စိတျဆိုးရမှာလဲ”
“မသိဘူးလေ အမနေ့ားတောငျ မလာတော့ဘူး ဆိုတော့ စိတျမြားဆိုးသလားလို့ပါ” “မဆိုးပါဘူး အမရေဲ့” ဟု ပွောပွောဆိုဆို အလှကွီးလှနသေော အမအေ့ား ရငျခှငျထဲဆှဲ၍ ဖကျလိုကျ လသေညျ။ သူ၏ ပုဆိုးအောကျမှ မာတောငျနသေော ညီတျောမောငျက အမေ့ ဆီးခုံကို ဝငျဆောငျ့ကာ အလြားလိုကျ ကပျနလေေ သညျ။ အမေ့ မကျြလုံးလေးမြား မှေးခနဲ့ ကြ၍ သှာပွီး ခကျြခွငျး ပွနျပှငျ့လာလသေညျ။ သူက အမေ့ ပါးပွငျနှငျ့ မကျြနှာတဈခုလုံး အနှံ့ နမျးလိုကျလသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ စညျသူစိုး ခါးကို ပွနျဖကျထားကာ သားဖွဈသူ အနမျးမိုးရှာခွငျးကို ကွညျနူးစှာခံယူနေ လသေညျ။ နမျးလို့ အားရသှားမှ စညျသူစိုးက သူ့မကျြနှာကိုရော လကျတှကေိုပါ ခှာလိုကျလသေညျ။ စညျသူစိုး၏ လကျတှကေ ခှာ သှားပမေယျ့ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးက စညျသူစိုးကို ဖကျထားမွဲ ဖကျထားလကျြ ရှိလသေညျ။
ထို့ကွောငျ့ စညျသူစိုးက အမကေို့ ကွညျ့လိုကျတော့ အမကေက ရုတျတရကျ သူမ၏ နှုတျခမျးလေးမြားနှငျ့ သူ့နှုတျခမျးလေးတှပေျေါ သို့ ဖိကပျကာ ခပျမွှငျးမွှငျးလေး စုပျနမျးလိုကျလသေညျ။ ခဏအတှငျးမှာပငျ ပွနျ၍ခှာလိုကျပွီး သူ့ကိုယျပျေါ မှ လကျမြားကိုပါ ဖယျ ခှာကာ “သား ဆိုငျသှားကွညျ့တော့နျော” ဟု ပွုံးစစ မကျြနှာနှငျ့ ပွောကာ မကျြလုံးလေးတဖကျကို မှိတျပွလိုကျလသေညျ။ စညျသူ စိုးမှာ ရငျဒိနျးဒိနျးခုနျကာ မယုံခငျြပမေဲ့လဲ အပြျောကွီးပြျောကာ “ဟုတျကဲ့ပါ မမေေ” ဟု ပွောကာ ဆိုငျခနျးဆီသို့ ထှကျလာခဲ့လေ သညျ။ ထမငျးစားခြိနျရောကျသောအခါ စညျသူစိုးက ခွထေောကျဖွငျ့ ပှတျပေးသောအခါ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးက ညုတုတု အကွညျ့ဖွငျ့ ကွညျကာ သူ့ပေါငျကွားဆီသို့ ခွထေောကျဖွငျ့ သူ့ညီတျောမောငျကို ပွနျပှတျပေးလသေညျ။ သို့သျော အကွံသမားစညျသူစိုးက ဒျေါ ဝငျ့ဝငျ့ဖူး ပွီးခါနီးအခြိနျတှငျ ခွထေောကျကို သိမျးကာ ထမငျးဝိုငျးမှ ထသှားလသေညျ။
ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ မခငျြမရဲဖွဈကာ ဆတျတငံ့ငံ့ဖွငျ့ ကနျြနခေဲ့လသေညျ။ ဦးဝငျးမောငျ ပွနျထှကျသှားသောအခါ စညျသူစိုးကွောငျ့ ဆတျတငံ့ငံ့ဖွဈကာ အဆကျပွတျခဲ့သော ကာမပနျးတိုငျကို တကျလှမျးရနျ အခနျးထဲသို့ဝငျကာ ကုတငျပျေါလှဲ၍ ကိုယျ့အစိကိုပွနျ ပှတျလသေညျ။ စညျသူစိုးသညျ အဖထှေကျသှားသောအခါ အမေ ဘာလုပျမလဲ သိခငျြသောကွောငျ့ အမရှေိရာသို့ ထှကျလာခဲ့လေ သညျ။ “ဟငျး… ဟငျး …အဟငျး……ဟငျး…” အမေ့ အခနျးတှငျးမှ ညီးသံမြားကွားရသောအခါ စညျသူစိုး တယောကျ လခြှေနျ လိုကျလသေညျ။ ဒီလို အခွအေနရေောကျအောငျ သခြော အကှကျရှခေဲ့ခွငျး ဖွဈလသေညျ။ အခနျးတံခါး အသာဟကွညျ့တော့ ထငျသညျ့အတိုငျး အမေ တယောကျ မိမှေးတိုငျး ဖမှတေိုငျးဖွငျ့ တီဆားပကျထားသလို ထှနျ့ထှနျ့လူးကာ ကိုယျ့အစိကို ပှတျရငျး လောကကွီးနှငျ့ ခဏ အဆကျပွတျကာ အကောငျးကွီးကောငျး နလေသေညျ။
စညျသူစိုးက ဝတျထားသော ပုဆိုးကိုခြှတျ၍ ခုတငျ ပျေါကနျ့လနျ့လှဲပီး ပေါငျ၂ဖကျကားလကျြ ကိုယျ့ဟာကိုပှတျကာ အကောငျးကွီး ကောငျးနသေော အမဖွေဈသူ ပေါငျကွားသို့ မကျြနှာ အပျကာ ပှတျနသေော လကျကိုဖယျ၍ အစိကို စုပျလိုကျလသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ ရုတျတရကျ လကျစှဲဖယျခံလိုကျရသောအခါ လနျ့သှားလသေညျ။ သို့သျော သနျမာသော လကျတစုံက ပေါငျ၂ခြောငျးကို ကိုငျကာ နူးညံ့သော နှုတျခမျးတစုံက မိမိ အစိကို လာစုပျ သောအခါ အိပျခနျးထဲ လာပွီး သူမကို လကျရဲဇကျရဲ ဘာဂြာပေးနသေူမှာ သားဖွဈသူ စညျသူမှတပါး မညျသူမှမဖွဈနိုငျဟု တှေးမိ သောအခါ အလိုကျသငျ့လေး သားဖွဈသူပေးသောအရသာမြားကို ခံယူနလေိုကျလသေညျ။ စညျသူစိုးမှာလညျး ပွတျလပျနသေော အမဖွေဈသူကို သားကောငျးတယောကျပီသစှာ ပွုစုရနျ အပီအပွငျ ယကျလတေော့သညျ။
”အိုး အို အ၊ အ အ အ ဟားးးးးးး ရှီးးးးးဟီးးးးးဟီးးးးးးးဟီးးးးးးးးးး အငှ့ ဟားးးးးးးးးးး ” ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးရဲ့ ညီးညူ သံလေးမြား အခနျးထဲ မှာ ထှကျပျေါနလေတေော့သညျ။ ငါးမိနဈခနျ့ကွာသောအခါ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး တကိုယျလိုး တှနျ့လိမျကာ စညျသူစိုးခေါငျးကို လကျ၂ဖကျဖွငျ့ ဖိကာကိုငျရငျး ကာမလမျးဆုံးသို့ ရောကျရှိကာ ပွီးသှားလတေော့သညျ။ ပွီးသညျ့နောကျ စညျသူစိုးက ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး ပေါငျကို ကားပွီးဒူးနှဈဖကျကိုထောငျလိုကျသညျ။ ထို့နောကျသူရဲ့လီးကိုလကျနဲ့ကိုငျပွီး အမစေ့ောကျပတျအဝမှာတလေို့ကျခြိနျတှငျ “ကိုစိုးရေ ကိုစိုး ဒီမှာ ရှလောစဈပေးပါဦး” ဟူသော သိနျးစိုး ချေါသံကို ကွားလိုကျရလသေညျ။ တျောသေးသညျ သိနျးစိုးက အိမျ အဝငျပေါကျနားကနေ အျောချေါနလေို့။ “အေး လာပွီဟေ့ လာပွီ” ဟု ပွနျအျောကာ ပုဆိုးကောကျဝတျရငျး အရေးကောငျး ဒိနျး ဒေါငျးဖကျြသော ရှပေေါငျသူအား စိတျထဲမှကြိတျ ကြိနျဆဲမိလသေညျ။ “မာ့မီ သာသားတို ညကတြှမေ့ယျနျော ဒယျဒီအိပျရငျ သား ဆီလာခဲ့ပေးပါနျာ မြှျောနမေယျ” “လာခဲ့မှာပေါ့ ကလေးရယျ” ပွောပွောဆိုဆို အမနှေု့တျခမျးလေးအား နှုတျဆကျအနမျးပေးရငျး ဆိုငျရှသေို့ထှကျလာခဲ့လသေညျ။
လြှာပျေါမှာကတော့ အမေ့ စောကျရေ အရသာကား စိမျ့စိမျ့လေးနှငျ့ နှခေါငျးထဲမှာ မှေးမှေးလေး သငျ့ပြံ့နပေါတော့သညျ။ ည ၁၁နာရီခှဲ အခြိနျတှငျ စညျသူစိုး နိုးလာခဲ့လသေညျ။ ညကအိပျယာစောစောဝငျခဲ့သညျက ယခုတရေးရခဲ့ ခပြွေီ။ လိငျမဆကျဆံခငျ တကိုယျရသေနျ့ရှငျးမှု လုပျပွီး ခန်ဓာကိုယျ အနံ့ဆိုးမြား မရှိအောငျ သနျ့ရှငျးတာက ကိုယျ့ရဲ့ လိငျဆကျဆံ ဖျောကို အဆငျပွစေရေုံသာမက ဆကျဆံရတာ ပိုပွီး ကွညျနူးပြျောရှငျစရာကောငျးတယျ ဟူသော နောငျတျောကွီးမြားညှနျကွား ခကျြအတိုငျး ကိုယျလကျသုတျသငျကာ ပွီးသညျ့နောကျ အမအေ့ခနျးဘကျသို့ ထှကျလာခဲ့လသေညျ။ အမေ့ အခနျးတံခါး အသာဟ ကွညျ့တော့ အမကေ နိုးကာ ထိုငျနသေညျ။ ခနအကွာ အမကေ ထလာပွီး အခနျးတံခါးဆီသို့ လြှောကျလာလသေညျ။ အမထှကျ လာသောအခါ သူက ဆီးကွို၍ဖကျကာ ရငျခှငျထဲဆှဲသှငျးပွီး အမနှေု့တျခမျးဖူးဖူးလေးကို စုတျနမျးလိုကျလသေညျ။
ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ သာဖွဈသူဆီ သှားရနျ အခနျးတံခါးဖှငျ့ အထှကျတှငျ ရုတျတရကျဆှဲဖကျပွီး အနမျးခံရသောအခါ လနျ့ကာ အျောမိ သျောလညျး အသံမထှကျတော့ပါ။ စညျသူစိုးက သူ့နှုတျခမျးတခုလုံး စုတျနမျးနပွေီ ဖွဈလသေညျ။ သူကလဲ အငမျးမရ ပွနျနမျးမိ လသေညျ။ “ဗွှတျ ! ! ! “ အနမျးရှညျကွီး ဆုံးသောအခါ စညျသူစိုးက သူအား အခနျးထဲသို့ ပှခြေီ့ကာ ချေါသှားလသေညျ။ အခနျးထဲ ရောကျသောအခါ မှတျသိပျပွငျးပွလှနျးသော အနမျးမိုးမြားရှာလတေော့သညျ။ နှုတျခမျးခငျြး လြှာခငျြး အတငျး တိုးထိပှတျသပျကာ မကျမကျမောမော နမျးလို့ မဝနိုငျပဲ နောကျမတှရေ့မညျကဲ့သို့ သူ၏ ကိုယျလုံးလေးကို တအားဖကျထားသလို သူကလညျး စညျသူစိုး ကို တအား ပွနျဖကျထားလသေညျ။ စညျသူစိုးက နမျးလကျြပငျ သူ့အကငြ်္ီကိုခြှတျလရော သူကလညျး စညျသူစိုး အကငြ်္ီကိုပွနျ ခြှတျပေးလသေညျ။
၂ယောကျသား ကိုယျပျေါမှာ အဝတျတမြှငျမှမရှိပဲ တုံးလုံးဖွဈသှားသောအခါ စညျသူစိုးက တှနျးလှဲလိုကျလေ သညျ။ ထိုနောကျ အပျေါမှတကျခှကာ သူ၏နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးအား ဖိကပျကာ စုတျနမျးပါတော့သညျ။ စညျသူစိုး လကျနှဈဖကျက လကျညိုးနှငျ့လကျမသုံးကာ နို့သီးခေါငျးလေးမြား ခပြေေးနပွေီး သူ့နို့၂လုံးအား အုပျကိုငျထားလသေညျ။ သူ့ခွထေောကျမြားက လညျး စညျသူစိုးခါးအား ညှပျကာ စညျသူစိုးလီကွီးက သူ၏ စောကျပတျပျေါတှငျ အပွားလိုကျ ကပျနလေသေညျ။ စညျသူစိုးက ခါး ကို ရှတေို့းနောကျငငျလုပျလရော စောကျစိမှစ၍ စောကျပတျကှဲကွောငျးအတိုငျး လီးကွီးက လှတိုကျနလေသေညျ။ ထိုအတိုငျးခန ကွာသောအခါ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ တဏှာစိတျမြားကွှသထကျကွှကာ ရာဂမီးလြှံမြား လောငျမွိုကျလကျြ စညျသူစိုးကို တငျးကွပျစှာ ဖကျတှယျကာ စောကျပတျထဲမှလညျး အရမြေား ပှကျခနဲ့ ပှကျခနဲ့ထှကျလာလသေညျ။
ထိုအခါ စညျသူစိုးက နမျးနရောမှ ခှာ၍ နို့မြားကို ပွောငျးစို့လသေညျ။ နို့တလုံးကိုစို့နခြေိနျတှငျ လကျတဖကျက နို့တလုံးကိုခပြေေး နကော ကနျြလကျတဖကျ၏ လကျညိုးနှငျ့ လကျခလယျ၂ခြောငျးပူးကာ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး၏ ပါးစပျထဲသို့ ထဲ့ပေးလသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး မှာ ပို၍ စိတျကွှလာကာ စညျသူစိုးလကျနှဈခြောငျးအား အားရပါးရစုတျလတေော့သညျ။ အတနျကွာ နို့စို့ပွီးသောအခါ စညျသူစိုး က လြှာကိုခပျတောငျ့တောငျ့လေးလုပျကာ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး ရငျညှနျ့မှ ဆီးစပျသို့ ဆှဲခကြာ ယကျလိုကျလသေညျ။ ထို့နောကျ အရရှေဲရှဲစို နသေော ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး စောကျပတျကို လြှာဖွငျ့အပွားလိုကျယကျပါတော့သညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ တငျးမထားနိုငျတော့ပဲ တခြီပွီး သှားလသေညျ။ စညျသူစိုးက မရပျပဲ စောကျစိကို သရကျစစေု့ပျသလိုစုပျကာ လကျ၂ဖကျက ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး၏ နို့သီးခေါငျးလေး၂လုံး ကို ခပြေေးလရော ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ ညီးသံလေးမြားပေးကာ ကာမစိတျမြားပွနျကွှလာလသေညျ။
“ဟငျးးး အငျးးး ဟငျးးး ဟငျးး” စောကျပတျမှာလဲ အရမြေားလိုကျကာ စိုရှဲလာလသေညျ။ စညျသူစိုး အခွအေနကေို အကဲခတျနသေူဖွဈရာ ဒီအခြိနျသညျ လိုးရနျ အကောငျးဆုံးအခြိနျဖွဈကွောငျး သတိပွုမိကာ စောကျစိစုပျနခွေငျးကို ရပျလိုကျလသေညျ။ “ဟငျး အငျး ဘာလို့ရပျလိုကျတာလဲ ဆကျစုပျပေးပါ သားရယျ” “မမေ့ကေို့ ခဈြမလို့ပါ မမေေ” ပွောပွောဆိုဆိုနှငျ့ စညျသူစိုးက ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး ပေါငျကွားတှငျ နရောယူ ကာ သူ့လီးကွီးနှငျ့ စောကျပတျဝကို တလေို့ကျလသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး စောကျပတျကွီးမှာ လီးအထိအတှကေို့ ခံစားသိရှိသညျ့ အလား ခုံးထလာလသေညျ။ စောကျပတျအတှငျးထဲမှလညျး တစုံတခုကို တောငျ့တသညျ့အလား အတှငျးသားမြားက တဆဈဆဈ နှငျ့ ရှုံ့ခြီပှခြီ ဖွဈလာလသေညျ။ စညျသူစိုးက ခါးတလှုပျလှုပျဖွငျ့ နှဲ့ကာ ဖွဖွေခေငျြးသှငျးလတေော့သညျ။ “အား ကြှတျ ကြှတျ သား ဖွေးဖွေးနျော” “ဟုတျကဲ့ပါ မမေေ” ဟုဆိုကာ သှငျးရငျးဖွငျ့ အဆုံးထိဝငျသှားလသေညျ။ စညျသူစိုးက အထုတျအသှငျး ဖွေးဖွေး ခွငျး လုပျကာ လိုးပါတော့သညျ။ အခကျြ၂၀ကြျောသောအခါ “သား မွနျမွနျဆောငျ့ပါတော့ အမခေံနိုငျပွီ” ဟုဆိုသဖွငျ့ စညျသူစိုး က စကျသနေတျပဈသလို အသားကုနျဆောငျ့လိုးလတေော့သညျ။
ထိုသို့ လိုးနရေငျးစညျသူစိုးက “မမေေ သားလိုးတာ ခံလို့ ကောငျးလား” “ဘာတှပွေောနတောလဲသားရယျဆောငျ့မှာသာ ဆောငျ့စမျးပါ” “ပွောပွပါ မမေရော သားက ကွားခငျြလို့ပါ မမေေ မဖွရေငျ မဆောငျ့တော့ဘူး” ဟု ပွောပွောဆိုဆို ဆောငျ့ခကျြကို လြော့ခလြိုကျလသေညျ။ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ စညျသူစိုး၏ ညဈကယျြကယျြ လုပျပုံကို သဘောကကြာ “ကောငျးတယျစညျသူရယျကောငျးတယျ သားလီးက မငျးအဖထေကျကွီးတော့ ခံလို့ အရမျးကောငျးတယျမငျးအဖထေကျသာအောငျ လိုးပွစမျးသားလေး မငျးအဖေ ကယျြအောငျ လိုးနိုငျခဲ့တဲ့ မမေေ စောကျပတျကို မငျးလီးကွီးနဲ့ လိုးလိုကျစမျး” ဟု ပိုပိုသာသာ တမငျ စိတျကွှအောငျ ပွောလိုကျလသေညျ။ ထိုသို့ ပွောပွီးနောကျ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးမှာ စောကျပတျထဲမှ အရမြေားပိုလိုကျလာလသေညျ။ စညျသူစိုးမှာ အမေ့ စကားကွားပွီး စိတျကွှသှားကာ မီးကုနျယမျးကုနျလိုးပါ တော့သညျ။ ခနကွာသောအခါ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး တကိုယျလုံး တဆတျဆတျတုနျကာ စညျသူစိုးကို တငျးကပျြစှာဖကျကာ ပွီးသှားလေ သညျ။
တခြိနျမှာပငျ စညျသူစိုး လီးထဲမှ သုတျရညျမြားကလညျး ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး စောကျပတျထဲသို့ အရှိနျပွငျးစှာ ပနျးထှကျသှားလေ သညျ။ ထိုညမှစကာ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးသညျ ညတိုငျး ဦးဝငျးမောငျအိပျခြိနျတှငျ စညျသူစိုးနဲ့ လိုးလတေော့သညျ။ သို့သျော အခါ တဈည သောအခါဝယျ ဦးဝငျးမောငျ နှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောနရောမှ လနျ့နိုးလာလသေညျ။ ဘေးမှ မိနျးမဖွဈသူကို ကွညျ့တော့လဲ မရှိ။ အပေါ့အပါးသှားနသေညျ ဖွဈတနျရာ သူလဲ အပေါ့အပါးသှားရနျ အိပျယာထကာ အခနျးထဲမှထှကျလာလသေညျ။ အခနျးအပွငျ ရောကျသျော ညီးညူ သံတခုကို သားတျောမောငျ အခနျးဆီမှ ကွားရလသေညျ။ ဘာမြားဖွဈနလေဲ ဟူသော စိုးရိမျစိတျဖွငျ့ အခနျး ဆီသို့ လာခြိနျတှငျ “အား အ ကောငျးလိုကျတာသားရယျ” ဆိုသော စကားသံမြားကွောငျ့ ခွလှေမျးတုံ့သှားလသေညျ။ ခွသေံမ ကွားအောငျ အသာသှား၍ စညျသူစိုးအခနျးတံခါး အသာဟကွညျ့လသေျော ဦးဝငျးမောငျ ပါးစပျ အဟောငျးသား ဖွဈသှားလေ သညျ။ မွငျလိုကျရသော မွငျကှငျးကား ဝငျ့ဝငျ့ဖူးက လေးဖကျထောကျလကျြ ခုတငျပျေါမှာ စညျသူစိုးက နောကျက ဝငျ့ဝငျ့ဖူး စောကျ ပတျထဲ လီးသှငျးကာ လိုးနသေော မွငျကှငျးပငျ။
မွငျနရေသော အခွအေနသေညျဦးဝငျးမောငျ၏သှေးသားမြားကိုထူးထူးခွားခွား ပငျ လှုပျရှားသှားစလေသေညျ။မယုံနိုငျ အံ့အားသငျ့သောစိတျတို့ကလှမျးမိုးနသေဖွငျ့ထိုသို့သှေးသားတှလှေုပျရှားသှားမှုကိုဦးဝငျး မောငျသတိမထားမခြေ။ အမနှေငျ့ သားလိုးနသေော အခွအေနကေို ဦးဝငျးမောငျ ဘယျတုနျးကမှယောငျလို့တောငျ မစဉျးစားမိခဲ့ ခြေ။ ခုတော့ဘာလုပျရမညျကို မသိတော့ခြေ။ “ကောငျးတယျ သားလေး လိုးစမျးအမကေို့” ဦးဘမောငျ ခေါငျးကြိနျးလပွေီ။ အဝေးသို့ထှကျပွေးလိုကျခငျြသညျ။ ဒါပမေယျ့ ထူးခွားသောခံစားမှုတခုကဆှဲငငျထားသလို ဖွဈနလေသေညျ။ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ မိနျးမ ဖွဈသူက တခွားသော ယောကျြားတယောကျနှငျ့လိုးနကော လိုးနသေူကလညျး ကိုယျ့သားအရငျးဖွဈနသေော အခွအေနမှော သမ ရိုးကြ အခွအေနမေဟုတျပါ။ သူတို့ ၂ယောကျကွညျ့ရသညျမှာ လိုးနတောကွာပွီဖွဈလောကျလသေညျ။
” တောကျ” ဦးဝငျးမောငျ ဒေါသတှေ တရိပျရိပျထှကျလာလသေညျ။ တခွားတဖကျတှငျလညျး ကာမရမ်မကျမြားထူးခွားစှာ အရှိနျအဟုနျဖွငျ့နိုးကွားလာလသေညျ။အသိစိတျကမိနျးမနှငျ့ သားလုပျသူတို့၏ လူ့ဘောငျအပွငျဘကျက ဖောကျပွနျမှုကိုဒေါသ ထှကျနသေညျ။ မသိစိတျက လိုးပှဲကွညျ့ရငျး ရာဂစိတျမြား နိုးကွားနလေသေညျ။ ထိုကာမရမ်မကျစိတျ၏စဆေ့ျောမှုကွောငျ့ပငျဦးဘ မောငျ လီးကွီး တောငျမှနျးမသိ တောငျလာလသေညျ။ဒေါသအခြောငျးခြောငျးထှကျနသေော ဦးဝငျးမောငျသူ့လီးကွီးတောငျလို့ တောငျနမှေနျးမသိသေးပါ။ မသိစိတျထဲကရာဂဇောဖွငျ့ သားနှငျ့ မိနျးမဖွဈသူလိုးပှဲကို ကွညျ့ရငျး လီးကွီးကိုအလိုလိုဆုပျကိုငျမိကာ ဂှငျးထုမိသညျ့ အခွအေနသေို့ဟရောကျမှနျးမသိရောကျသှားလသေညျ။ ပုဆိုးကိုစလှယျသိုငျးကာ လီးခြောငျးကွီးကို အပီ အပွငျဆုပျကိုငျပွီးဂှငျးနာနာထုနမေိလသေညျ။ စညျသူစိုး ဆောငျ့လိုကျတိုငျး တုနျခါသှားသော ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူး၏ ဖငျဖွူ ဖွူ ကွီးမြား ကိုကွညျ့ကာ ဂှငျးထုခကျြပိုပွငျးလာကာနောကျဆုံးတော့သုတျရညျတှအေောကျခံဘောငျးဘီထဲသို့ ပနျးခမြိလသေညျ။ မိမိမှာ လီး ပွနျတောငျလာသညျကို သတိပွုမိကာ ဦးဝငျးမောငျ ဝမျးသာသှားလသေညျ။
ယောကျြားတယောကျအဖို့ လီးမတောငျနိုငျခွငျးမှာ ရှငျ လကျြနှငျ့ သခွေငျးပငျဖွဈလသေညျ။ အိပျ စား လိုး ဟူသော အရာသုံးပါး၌ တခုခုဆုံးရှုံးရလြှငျ ဘဝပြျောရှငျမှု ဆိတျသုနျးရခွငျးပငျ ဖွဈလသေညျ။ ဦးဝငျးမောငျမှာ အပြျောကွီးပြျောကာ သားဖွဈသူနှငျ့ မိနျးမဖွဈသူကို အပွဈမမွငျတော့ပဲ ကြေးဇူးတငျမိလသေညျ။ ထိုအပွငျ သညျလိုခြောငျးကွညျ့ရသညျ့ ခံစားမှုမြိုးနှငျ့ ကိုယျ့မိနျးမ၏ ဖုံးကှယျထားသော ကာမခံစားမှုမြားကို မွငျရသော အခွအေနကေို သဘောကြ နှဈခွိုကျမိကွောငျး သတိပွုမိလသေညျ။ အစထဲက ပှငျ့လငျးသူပီပီ သားဖွဈသူနှငျ့ ၂ယောကျညှပျကာ ဝငျ့ဝငျ့ဖူးကို လိုးလြှငျ ဘယျလိုနမေလဲ ဟူသော အတှေးတို့လညျး ဝငျရောကျလာလသေညျ။ ထိုကွောငျ့ ရအေမွနျဆေးကာ မိမိ အခနျးဆီသို့ ပွနျ၍ အိပျနလေိုကျလသေညျ။ စညျသူစိုးနှငျ့ ဝငျ့ဝငျ့ဖူး၏ လိုးပှဲကွီးက အရှိနျမသသေေးပဲ ဆကျလကျ ကပွလကျြရှိ လတေော့သညျ။
“ဖူးရေ” “ရှငျ မောငျပွောလေ ဘာလုပျခငျြလို့လဲ” “အခနျးထဲသှားရအောငျ” “ဟုတျ လာပါပွီ” စညျသူစိုး ရှတှေ့ငျ သခြော ဝငျ့ဝငျ့ ဖူးကို ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျပွောကာ ချေါခဲ့လသေညျ။ စညျသူစိုးမှာ ဖခငျဖွဈသူ၏ ထူးဆနျးသော အပွုအမူကွောငျ့ တခုခုတော့ တခုခုပဲ ဟုအတှေးဝငျကာ ဘာလုပျရမှနျးမသိ ဗြာမြားနမေိလသေညျ။ သူနှငျ့ အမကေိ့စ်စကို အဖသေိပါက မိုးမီးလောငျတာထကျဆိုးမညျ ဖွဈကွောငျး တှေးမိကာ စိုးရိမျစိတျတို့ဖွငျ့ ဂနာမငွိမျ ဖွဈနလေသေညျ။ အတနျကွာ စောငျ့ကွညျ့သျောလညျး ပွနျထှကျမလာသဖွငျ့ အဖတေို့အခနျးဆီသို့ သှားကာ ခြောငျးကွညျ့လသေညျ။ အခနျးကမွငျကှငျးကိုတှသေ့ောအခါ စညျသူစိုးမှာ ဝမျးနညျးဝမျးသာဖွဈရ လသေညျ။ မွငျကှငျးကား အဖကေ အမကေို့ ခုတငျပျေါလေးဖကျထောကျကာ နောကျမှ လိုးနသေော မွငျကှငျးပငျဖွဈလသေညျ။ ဝမျးသာစရာ အခကျြကား ဖခငျဖွဈသူ ဦးဝငျမောငျ လီးပွနျတောငျလာခွငျးပငျ ဖွဈလသေညျ။ တဆကျထဲမှာပငျ အမနှေငျ့ လိုးခငျြမှ လိုးရတော့မညျဟူသော အသိကလဲ ဝမျးနညျးစရာကောငျးလှပါတော့သညျ။
“အား အ အ ထှကျကုနျပွီ မောငျရဲ့ ပွီးသှားပွီမောငျ” “အား ကောငျးလိုကျတာ ဖူးရာ ဖူး ဖူး” ဟူသော ရရှေတျမွညျတမျးသံမြားနှငျ့အတူ ဦးဝငျးမောငျနှငျ့ ဒျေါဝငျ့ဝငျ့ဖူးတို့ ရှဆေ့ငျ့ နောကျဆငျ့ပွီးသှားလသေညျ။ “မောငျ ဘာဆေးတှသေောကျလိုကျလို့ လီးပွနျတောငျလာတလဲဟငျ” “ဘာဆေးမှမသောကျဘူး မငျးနဲ့ သားနဲ့ လိုးတာကွညျ့ပွီး လီးတောငျလာတာဟေ့” “ရှငျ” “ခုမှ ရှငျမနနေဲ့ ဟိုတံခါးပေါကျက ခြောငျးကွညျ့နတေဲ့ ကောငျလဲ လာခဲ့ ငါအကုနျသိပွီးပွီ ငါတို့မိသားစု သှေးမကှဲပဲ ပြျောပြျောရှငျရှငျနကွေမယျ အဲ့ဒါကို မငျးတို့သဘောတူလား ဘာပဲဖွဈခဲ့ဖွဈခဲ့ မောငျ အကုနျခှငျ့လှတျတယျ” ဦးဝငျးမောငျမှာ ဝဝေို့ကျမနပေဲ ဒဲ့ အပျေါဆီးကနေ ပွောကာ အမှတျယူလိုကျလသေညျ။ မထူးလဲ တားမရမညျ့ အတူတူ မိသားစု သာယာရေးကို ရှရှေု့ကာ နားလညျမှုယူလိုကျလသေညျ။ စညျသူစိုးမှာလညျး အဖနှေငျ့ပေါငျးကာ လိုးပှဲကွီးဆငျနှဲရမညျ့ အသိကွောငျ့ ရငျခုနျနှုနျးမွနျကာ လီးကွီးတထောငျထောငျနှငျ့ အခနျးထဲသို့ဝငျရောကျလာလသေညျ။ “လာ သား မငျးမမေကေို ဖဖေ့ရှေ့မှေ့ာ အပွတျလိုးပွစမျး” “ဟုတျကဲ့ပါဖဖေေ” ဟုပွောရငျး အမပေ့ေါငျကွားတှငျ နရောယူကာ လီး ကွီးကို စောကျပတျဝမှာတကေ့ာ စိနျစီနနျးရဲ့ ခဈြဇာတျလမျးကို ဆကျလကျ ကပွတော့မညျ ဖွဈကွောငျး တငျပွရငျး နားပါရစေ တော့ခငျဗြာ။
စိန်စီနန်း က ချစ်ဇာတ်လမ်း
“ဦးဇေယျာလင်း ရပါပီခင်ဗျာ တသိန်းငါးသောင်း ရေကြည့်ပါဦးဗျ သုံးလပြည့်ရင် ရွေးပါ မရွေးဖြစ်လဲ အတိုးသတ်ပေးပါခင်ဗျာ” “ကျေးဇူးပါပဲညီလေး” လူကြီး ပိုက်ဆံယူပီးထွက်သွားလေသည်။ “ဟေ့ယောင် ဒီဒေါ်တင်တင်ဦးက ဘာလဲ ရွေးတာလား” “ဟုတ်တယ်အကိုလေးရွေးတာပါ” “အန်တီ ခနလေးစောင့်ပေးပါခင်ဗျ” စည်သူစိုး အထဲဝင်ခဲ့လေသည်။ “မေမေရေ ဒါလေး ရွေးမလို့တဲ့” “သားကလည်း ဒီမှာ ဟင်းချက်နေတာကို သားဖာသားကြည့်လေကွယ်” “ဟင်း ကြည့်ရတာ မျက်စိလည်ပါတယ်ဆို မှ” “လူဆိုးလေး မေမေနဲ့ ဖေဖေမရှိရင် မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ” “အဲ့ချိန်ကျ သူဖာသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မေမေရာ” စည်သူစိုးက ဒီ တိုင်းပင် စိတ်မပါ၍ မလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုက ဓားထောက်လုပ်ခိုင်းတောင် အသေသာခံမည် မလုပ်ရေးချာမလုပ်။ စိတ်ဝင်တစား လုပ် ပီဆိုလျှင်လည်း အသေခံကာ လုပ်မည့်လူစား။
ယခုလည်း ဆိုင်ထိုင်ချင်သည်ဆို၍ ထိုင်သည်။ အားလုံး အကုန်ပတ်မလုံးစုံလုပ်တတ်သည်။ ပစ္စည်းရွေးသူလာလျှင် ပစ္စည်းရှာ တတ်သည်။ သို့သော် မိခင်ဖြစ်သူရှိလျှင် မလုပ်ပဲ နွဲ့ဆိုးဆိုးတတ်သည်။ သူ့နာမည်က စည်သူစိုး။ အဖေက ဦးဝင်းမောင် ကား အရောင်းအဝယ်လုပ်ကာ အမေက ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး အိမ်နှင့်တွဲကာ အမိန့်ရ အပေါင်ဆိုင် ဖွင့်ထားလေသည်။ အတိုးနှုန်း သက်သာခြင်း၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မှန်ကန်ခြင်း၊ ပေါင်နှံသူများအပေါ် သက်ညှာခြင်းတို့ကြောင့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ စိန်စီနန်း အပေါင်ဆိုင်သည် နာမည် ရကာ လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်လေသည်။
အကူ အလုပ်သမား၂ယောက် ခေါ်ထားရလေသည်။ စည်သူစိုးကား အသက်၂၃နှစ်ခန့်ရှိ ဘွဲ့ရ လူငယ် တယောက်ဖြစ်ကာ အပျော်အပါးမမက်ပဲ အလုပ်စိတ်ဝင်စားသော အနေအထိုင် ကျစ်လစ်လိမ္မာသူတယောက်ဖြစ်လေ သည်။ အဖေလုပ်သူက သားဖြစ်သူ ကားဝယ်\_ရောင်းလုပ်စေချင်သော်လည်း သူက တတ်သိနားလည်ရုံ လုပ်တတ်ရုံသာ သင်ထား လေသည်။ သူတကယ် လုပ်ချင်သည်ကား အမေရဲ့ အပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်း။ အပေါင်ဆိုင်ကား လူတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေသမျှ ကာလ ပတ်လုံးပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ဟုသူကယူဆလေသည်။
နံနက်၆နာရီ သားမိ သားဖ ၃ယောက်လုံးထကာ Gymသွားဆော့ ပီးမှ ရေချိုးကာ မနက်စာစားလေ့ရှိသည်။ ပီးနောက် ၉နာရီအချိန် တွင် ဦးဝင်းမောင်က ကားပွဲစားတန်းသို့ သွားကာ စည်သူစိုးနှင့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက ဆိုင်ဖွင့်လေသည်။ ပိုက်ဆံရှိ လူချမ်းသာစာရင်းဝင် သော်လည်း ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက အိမ်မှုကိစ္စကို သူတယောက်ထဲသာ နိုင်အောင်လုပ်လေသည်။ မနက်တပိုင်းလုံး စည်သူစိုးက ဆိုင်ထိုင် ကာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက အိမ်မှုကိစ္စဗာဟီရနှင့် မီးဖိုချောင် ထမင်းဟင်းချက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်လေသည်။ ချက်ပြုတ်ပီးစီးသည့်အခါ ဆိုင်ခနဝင်ကြည့်၍ ဦးဝင်းမောင်ထမင်းစားပြန်လာသည့်အခါ သားမိ သားဖ ၃ယောက် ထမင်းလက်ဆုံစားလေ့ရှိကြသည်။ နေ့လည် ပိုင်း ဦးဝင်းမောင် ကားပွဲစားတန်းသွားသည့်အခါ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက ဆိုင်ထိုင်၍ စည်သူစိုးက အပြင်အလုပ်များရှိက ထိုအချိန်တွင် ထွက်လုပ်လေသည်။ ညနေ၅နာရီတွင် ဆိုင်ပိတ်ကာ ဦးဝင်းမောင်လည်း ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်လေသည်။
၆နာရီတွင် ညစာစား ကြ၍ ညစာစားပီးသော် စည်သူစိုးက ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်လည်းကြည့် မကြည့်ပါကဂိမ်းဆော့ချင်လည်းဆော့ စာဖတ်ချင်လည်းဖတ် ကာ သို့မဟုတ်ပါက သူငယ်ချင်းများဖြင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထွက်ထိုင်တတ်လေသည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားသည့်အခေါက်မှာ ဆယ်ခါ့ တစ်ခါဖြစ်လေသည်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ည၉နာရီထိုးလျှင် စည်သူစိုး အိမ်အရောက်ပြန်လာရလေသည်။ ည၉နာရီဆိုလျှင် အိမ်တံခါးပိတ်ကာ အိပ်ယာဝင်ကြပြီဖြစ်သည်။ စည်သူစိုးတို့၏ နေ့စဉ် နိဓ္ဓဓူဝ လုပ်ငန်းစဉ် ဇယားဖြစ်လေသည်။
သို့သော် ကံကြမ္မာဇာတ်ဆရာဟူသည် အလှည့်မပြောင်း အချိုးအကွေ့များဖြင့် လောကီလူ့ဘဝကို တန်ဆာဆင်ခြ ယ်မှုန်းသော အလေ့အထရှိသည့်အတိုင်း စည်သူစိုး၏ဘဝကို တန်ဆာဆင်ခြယ်မှုန်းခဲ့လေသည်။ ညသန်းခေါင်ယံ မရောက်တရောက်အချိန် စည်သူစိုး ဆီးတအားအောင့်သဖြင့် လန့်နိုးလာလေသည်။ ညဦးပိုင်းက ရေအများကြီးသောက်မိလိုက်တာကို သတိရလေသည်။ အိမ်သာသွားရန် ထကာအခန်းထဲမှထွက်ခဲ့လေသည်။ အိမ်သာသွားပီး အပြန် အဖေတို့ အခန်းရှေ့မှ အဖြတ်တွင် စကားသံများ ကြားလိုက်ရလေသည်။ ဒီချိန်ကြီး ဘာများ အရေးတကြီးပြောနေသလဲဟု စူးစမ်းလိုစိတ်ဖြင့် အခန်းတံခါး အသာဟကာ နားထောင် ကြည့်လိုက်တော့… “မောင်ကကွာ ဆေးသောက်တာတောင်မှ မရဘူးကွာ” “ဟာ ဖူးကလည်း ကိုယ်လဲ ဆေးသောက်တာပဲကွာ အချိန်တော့ပေးရမှာပေါ့”
“တော်စမ်းပါ မောင်သာအစကထဲက ဆင်ခြင်နေရင်ဘာမှမဖြစ်ဖူး အဲ့ဆေးလိပ်တွေမသောက်ပါနဲ့လို့ အစောကြီးကထဲက ပြောသားပဲ တရုတ်ဆေးလိပ်ကမှ ကောင်းတာဆိုပီး နားမထောင်ပဲ သောက်တာလေ” “ဒီလောက်ထိဖြစ်မယ် မှန်း မောင်လဲမထင်မိလို့ပါကွယ် ဆရာဝန်ကတော့ လုံးဝ ပန်းသေတာ မဟုတ်လို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်လေ ဖူးရဲ့” “မျှော်လင့်နေတာကလည်း ၆လတောင်ရှိနေပီ ဘယ်တော့မှ ပြန်ကောင်းမှာလည်း ဖူးလဲသွေးသားနဲ့ပါမောင်ရယ် ဖူးလေ တခါ တလေ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်မိတယ် မောင်” “အေးပါမောင်ကြိုးစားပါ့မယ်ကွာ ခုတော့ ဒီအတုလေးနဲ့ ပြုစုပီးတာလေးပဲကျေနပ် လိုက်ပါကွာ” “ဟင်း ပြောလိုက်ရင်ဒီလိုချည်းပဲ ဖယ် ရေသွားဆေးဦးမယ်” ဟုဆိုကာ ထွက်လာသော မိခင်ဖြစ်သူ မြင်မှာစိုး၍ မှောင်ရိပ်တွင် အသာလေး ကွယ်နေလိုက်ရလေသည်။
စည်သူစိုး သိလိုက်ရသော အဖြစ်အပျက်များ အပေါ် စိတ်ရှုပ်သွားမိလေသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူကိုလည်း အပြစ်မတင်ရက် မိခင်ကို လည်း မည်သို့ ကူညီရမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားတတ်အောင်ဖြစ်လေသည်။ နောက်နေ့ မနက်မှစ၍ စည်သူစိုးသည် မိခင်ဖြစ်သူအား သတိထားစောင့်ကြည့်မိလေသည်။ အကူခေါ်ထားသော ကောင်လေးများ ဖြစ်သော အောင်မင်းနှင့် သိန်းစိုးတို့ ၂ယောက်မှ သိန်းစိုး အား လိုတာထက်ပို၍ အရောတဝင်နေနေကြောင်း တွေ့ရလေသည်။ စည်သူစိုးမှာ ပို၍ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်မိလေသည်။ သိန်စိုး ကား သူနှင့်ရွယ်တူဖြစ်ကာ သူလိုပင် အသားဖြူ ဖြူ မေးရိုးခိုင်ခိုင် နှာတံပေါ်ပေါ် နှင့် သွယ်လျလျ ကိုယ်ဟန်ရှိလေသည်။ ခါးသိမ် သိမ် တင်ပါးကျစ်ကျစ်နှင့် တောင့်တင်းသောပါင်တံများက အလိုးအဆောင်းကောင်းသော ယောက်ျားကောင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ နေသော လက္ခဏာများဖြစ်လေသည်။
မိခင်ဖြစ်သူ ဘယ်ခြေလှမ်း လှမ်းတော့မည်ဆိုတာ သိနေသော စည်သူစိုးသည် မည်ကဲ့သို့ တားဆီးရမည်ကို အကြံအိုက်လျက်ရှိလေသည်။ ဆိုင်သိမ်း ညစာစားပီးသောအခါ စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ထွက် လာခဲ့လေသည်။ “ဟေ့ စည်သူ ပျောက်လှချေလား ခုမှပေါ်လာတယ် ဘာသောက်မှာလဲ ညီးလေးရေ မှာမယ်ဟေ့” “ညီလေး Speed တဘူးယူခဲ့ သံဘူးနော်” “ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ” “ကိုစိုးမိုး မတွေ့တာတောင် အတော်ကြာပီဗျာ” “မင်းက လာမှမလာပဲကိုး မင်း ဇက်ပြာဖွင့်လိုက် စာအုပ်အသစ်တွေ ဒေါင်းထားတာရှိတယ် ကူးသွားတော့ မင်းလဲ Facebook သုံးပါဆိုတာကို ပြောရမဘူး ကွာ” “ကျနော်က စွဲမိရင် နေ့ရောညပါ သုံးမိမှာ ဒါကြောင့်ပါ ကိုစိုးမိုးရ” “အေးပါကွာ စည်သူ မင်းကြည့်ရတာ သိပ်မလန်းဘူးကွာ ဘာတွေညစ်နေလဲ” “ဘော်ဒါ တယောက်ပါဗျာ ပန်းသေသလိုဖြစ်နေတာ ၆လလောက်ရှိပီဗျာ ဘယ်လိုကူညီရမလဲစဉ်းစားနေတာ” “မင်းကတော့ကွာ ဘယ်သူ့မဆို ကူညီချင်တဲ့ကောင်ပဲကွာ ငါသိသလောက်ပြောမယ်ဆို အဲ့ဒါမျိုးက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်တာကွ ဘာတွေလုပ်မိလဲဆိုတာသိမှ ကုသရလွယ်တာကွ”
“တရုတ်ဆေးလိပ် ပိန်ပိန်လေးတွေလေ ပူရှိန်းဆေးလိပ်တွေ သောက်တာအကိုရဲ့” “အင်း ဒီခွေးတရုတ်တွေက သူတို့ဆီလူများတိုင်း လျော့ချဖို့ဆိုပီး သေချာ ပန်းသေတဲ့ ဆေးတွေရောပီးထုတ် တာ ခွေးမျိုးတွေ လူကို ဥပါဒ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ မင်းဘော်ဒါကို တတ်နိုင်ရင် လုံးဝ ဆေးလိပ်ဖြတ် ခိုင်းလိုက် ဆေးရွက်ကြီးက ပန်းသေစေပါတယ်ဆို ခွေးမျိုးတွေ ထုတ်တဲ့ဟာမှ သွားသောက်တော့ပိုဆိုးမှာပေါ့” “ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရာ သူကလဲ တနေ့ ဆယ် လိပ်လောက်သောက်တာ” “မသောက်ပလေ့စေနဲ့ အိပ်ရေးဝဝအိပ် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မီးဖုတ်တို့ ရွှေနီငှက်ပျောသီးတို့စားပေး စိတ်ဖိစီးမှုမရှိအောင်နေ စိုးရိမ်စိတ်မဝင်အောင်နေ အဲ့ဒါဆို ပြန်ကောင်းလာမှာပါကွ” “ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုကြီး ခုလိုရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ” “မလိုပါဘူးကွာ ဒါပေမဲ့ မင်းဘော်ဒါရဲ့ မိန်းမအတွက်တော့ စိုးရိမ်တယ်ကွာ မိန်းမတွေက လိင်မဆက်ဆံပဲနေနိုင်တာ သုံးလပဲကွ သုံးလကျော်ရင် သွေးသားဆန္ဒကိုက တောင်းလာတာ အဲ့ဒါကိုတော့ ဂရုတစိုက်ဖြေပေးပေါ့ သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြော ပြခိုင်းပေါ့” စည်သူစိုး ခေါင်းထဲ အချက်ပေးခေါင်းလောင်သံများဆူညံသွားလေသည်။
သိန်းစိုးကို မိခင်ဖြစ်သူက ရေလာမြောင်းပေးနေပီ။ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ ဖခင်ဖြစ်သူကို ဘယ်လိုပြောပြရပါ့မလဲ မိမိသိသည်ဆိုလျှင်ကော ဖခင်ဖြစ်သူ က ရှက်သွားလေမည်လား။ ကိုစိုးမိုး နောက်ဆုံးစကားက သူ့ကို ပိုပီးဖိအားများလာစေသည်။ကိုစိုးမိုးဆိုတာက သူ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အကို လက်ရှိ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ အပြာစာအုပ်များ မျှဝေပေးနေသောသူဖြစ်လေသည်။ သူက ဖေ့ဘုတ်မသုံး gmail လျှောက်ရုံဖြင့်မ ရ Code ပြန်ရိုက်ရ စိတ်မထင်လျှင် အကောင့်ပိတ်ခံရသော ဖေ့ဘုတ်ကို ဇယားရှုပ်သည်ဟု ထင်မြင်မိလေသည်။ အဲ့ဒီတော့ 18+စာအုပ်ကြိုက်သောသူ့အတွက် ကိုစိုးမိုးက PDFရှိသော စာအုပ်များ ဒေါင်ထားကာ သူလာလျှင် ကူးထဲ့ပေးလေ့ရှိလေသည်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထွက်လာကာမှ ပိုပီး စိတ်ညစ်လာသဖြင့် ကိုစိုးမိုးကို နှုတ်ဆက်ကာ ပြန်လာခဲ့လေသည်။
အိမ်သို့ပြန်ရောက်သော် စိတ်ညစ်စရာများမေ့ထားကာ ကိုစိုးမိုးပေးလိုက်သော Pdfများကိုဖွင့်ဖတ်ကြည့်လေသည်။ ၁၀ပုဒ်ခန့်ရှိလေ သည်။ ပထမဆုံးဖတ်မိသည်က ထူးခြားရေးသား၍ တိတ်တခိုးမှ တင်ဆက်သည့် “အရေခြုံ” ဆိုသော စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။ စ ဖတ်မိသည်မှစ၍ လက်ကမချချင်အောင်ကောင်းလွန်းကာ သွေးရင်းသားရင်း လိင်ဆက်ဆံသော စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။ အကြိုက် ဆုံးကား ခိုင်လေးနှင့် သူ့သားဖိုက်သော နောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်လေသည်။ ထိုအခန်းကို ၃ခါ ၄ခါလောက် ပြန်ဖတ်မိလေသည်။ နောက်ထပ်တအုပ် ဖတ်မိသောအခါ အကာမင်း ရေးသားသော “အမေနဲ့သားရဲ့ လက်ထပ်ပွဲ” စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။ အဖေက ပြသ နာရှိ၍ သားက အမေကို ဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းသော ဇာတ်လမ်းဖြစ်ကာ သူနှင့်တူနေသည်ကိုလည်းသတိပြုမိလေသည်။ နောက်ထပ်တွေ့ရသည်ကား ကာမလူဆိုး ခေါ် ကိုစည် ရေးသားသော “ဟက်ပီးဗယ်လင်တိုင်းဒေး” ဆိုသော စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးအကြာင်းကို ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် ရေးသားထားလေသည်။ စည်သူစိုး စာအုပ်များဖတ်ပီးနောက် အတိုင်းမသိ ပျော် ရွှင်သွားလေသည်။ လေပင်ချွန်လိုက်မိလေသည်။ Pdfပေးသော ကိုစိုးမိုးနဲ့ စာရေးဆရာအပေါင်း ကျန်းမာ ချမ်းသာပီး ကာမသိဒ္ဒိ၊ ပီ ယသိဒ္ဒိ၊ လာဘသိဒ္ဒိအပါအဝင် အလုံးစုံသော သိဒ္ဒိများရပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်မိလေသည်။ (ကျနော်လည်း တကယ် ဆုတောင်းပါတယ် ခိခိ / ပုံ – မြသာ) ဝိုင်းစက်သောမျက်လုံးတစုံ ထူထဲသောနှုတ်ခမ်း ဖြောင့်စင်းသောနှာတံပေါ်ပေါ်တို့က ရုပ်ရှင်မင်းသမီးချော စမိုင်းနှင့်ပုံစံတူကာ ကော့ချွန်နေသော ရင်သားများ စွင့်ကားဝိုင်းစက်ပြီး အနောက်ဖက်ကို ကောက်ထွက်နေ သော တင်သားများသည် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှပတရားများကို ဖော်ပြနေသော အရာများဖြစ်လေ သည်။ ထိုအလှတရားများကို အဖေ မသုံးဆောင်နိုင်ပါက သူသုံးဆောင်မည်ဖြစ်လေသည်။
အပြင်လူ ဘယ်သူ့လက်ကိုမှအပါမခံနိုင် ဖိတ်ချင်းဖိတ် ကိုယ့်အိတ်ထဲသာဖိတ်ရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်မိလေသည်။ မနက်ဆိုင်ဖွင့်ပီးသောအခါ လူပါးသောအချိန်တွင် စည်သူ စိုး အိမ်နောက်မီးဖိုချောင်သို့ အသာဝင်လာခဲ့လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ချက်ပြုတ်နေရာသို့ အသာနောက်မှ ဝင်ရပ်၍ တောင်အောင် အသင့်လုပ်ထားသော သူ့လီးကြီးဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဖင်ကြားသို့ချိန်ကာ ထောက်၍ သိုင်းဖက်လိုက်လေသည်။ “မေမေ ဘာတွေချက် နေတာလည်း” “အိုဟဲ့ ဒီကလေးဟာလေ အလန့်တကြား လွှတ်လေကွယ်” “လွှတ်ဘူး သားမေးတာ မဖြေရင်လွှတ်ဘူး” စည်သူ စိုးသည် ရံဖန်ရံခါ ထိုကဲ့သို့ကပ်ချွဲနေကြ။ သို့သော် ယခုကား ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အစပထမလန့်သွားသော်လည်း မိမိဖင်ကြားသို့ အ မြှောင်းလိုက်ထောက်လာသော သားဖြစ်သူ၏တောင်နေသာ လီးကြီးကို သတိထားမိသောအခါ ရင်ထဲဝယ် တဒိန်းဒိန်းတုန်လှုပ်သွား လေသည်။
၆လကြော်တောင့်တနေသော သွေးသားတို့က ဖိုသဘာဝအထိအတွေ့ကို ရရှိသဖြင့် လှုပ်ရှားစပြုလာသလို ဦးနှောက် အသိစိတ်ကလည်း မသင့်တော်ကြောင်းအသိဝင်လာသည်နှင့် ရုန်းထွက်လိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးက အသာလွှတ်ပေးကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားသောအခါမှ ခါးကနေကိုင်၍ အသာစွဲကပ်ကာ ဖက်ထားလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုး၏ လီးနှင့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့် ဖူး၏ စောက်ပတ်ကား ကွက်တိထပ်တူကျကာ ဖိကပ်မိလေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးကား စောက်ပတ်ထဲမှလည်းဆစ်ခနဲ့ အရေများစိမ့် လာလေသည်။ ထို့ပြင်စည်သူစိုးကား ဒီတိုင်းအငြိမ်မနေ မျက်နှာအနှံ့ ငြင်သာစွာ နမ်းရှိုက်လာသောအခါ အထိအတွေ့ကို ယစ်မူး သာယာလာလေသည်။ ပျောက်လုနီးနီးဖြစ်နေသော အသိစိတ်ကို ပြန်ထိန်းကာ ရုန်းထွက်လိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးကား ပြန်မ လွှတ်သေးပဲ… “ဟင်း မေမေကလည်း သားကချစ်လို့နမ်းတာကို” ဟုဆိုကာ အမြှောင်းလိုက်ကပ်နေသော သူ့လီးနှင့် စောက်ဖုတ် ကို အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲပေးလေသည်။
မသိစိတ်ကသာယာပီး ရမက်သွေးသားတို့က ကြိုက်နှစ်သက်နေသော်လည်း အသိစိတ် က ကောင်းကောင်း သတိရှိနေသည့် ဒီတခါတော့ သတိတရဖြင့်ငြင်းဆန်ကာ… “ဒီကလေးဟာလေ လွှတ်ဦး” ဟုဆိုကာ အတင်း ရုန်းထွက်လိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးကလည်းလွှတ်ပေးလိုက်လေသည်။ “မေမေကလဲ ဘာဟင်းလဲမေးတာကိုး” “ကြက်သား ပြုတ်ကြော် မုံလာဥလချဉ်ရည်ဟင်း ငရုပ်သီးထောင်း ဒါပဲလေ သွားတော့ လူက အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ဟာကို ဆိုင်ကောင်းကောင်းမ ကြည့်ဘူး” “သိချင်လို့မေးတာကိုး မေမေက ဒီတိုင်းပဲ သွားပီ” အပေါ်စီးက ဖိဟောက်ကာ မောင်းထုတ်လိုက်လေသည်။ တ ဒိန်းဒိန်းခုန်နေသော ရင်ဘတ်ကိုဖိရင်း ခြေတုန်လက်တုန် စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေကိုယူသောက်လိုက်ရလေသည်။ လာထောက်ထားသည့် စည်သူစိုး လီးကြီးက နဲနဲနောနောမဟုတ် သူအဖေထက်ပင်ကြီးလိမ့်မည်ဖြစ်လေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးဟု အများက ဒေါ်တပ်ခေါ်နေကြသော်လည်း တကယ်တန်း အသက်အားဖြင့် လေးဆယ်ကျော်ရုံလေးသာရှိလေသည်။ သူရဲ့ ဝိုင်းစက်သောမျက်လုံးတစုံ ထူထဲသောနှုတ်ခမ်း ဖြောင့်စင်းသောနှာတံပေါ်ပေါ်တို့က ရုပ်ရှင်မင်းသမီးချော စမိုင်းနှင့်ပုံစံတူကာ ကော့ချွန်နေသော ရင်သားများ စွင့်ကားဝိုင်းစက်ပြီး အနောက်ဖက်ကို ကောက်ထွက်နေသော တင်သားများကြောင့် တက္ကသိုလ်တုန်း ကထဲက လူသိများခဲ့သူဖြစ်လေသည်။ သို့သော် မိဘများ၏ အုပ်ထိန်းမှုကောင်းခြင်းကြောင့် ရည်းစားသနာ မထားဖူးပေ။ ကျောင်း ပီးပီးချင်းမှာပင် သူ့ထက် ဆယ်ငါးနှစ်ခန့်ကြီးသော ဦးဝင်းမောင်နှင့် လူကြီးချင်းသဘောတူကာ ပေးစားခဲ့လေသည်။ ဦးဝင်းမောင်က အသက်သာကြီးသော်လည်း ခေတ်မှီ ပွင့်လင်းကာ လူငယ်ဆန်သူဖြစ်လေသည်။ ငယ်စဉ်ကထဲက အားကစားကို ဂရုတစိုက် လုပ်လေ့ရှိသူဖြစ်လေသည်။ ဝင့်ဝင့်ဖူးနှင့်ရသောအခါတွင်လည်း ဝင့်ဝင့်ဖူးကိုပါ အားကစားလုပ်စေလေသည်။ လိင်ဆက်ဆံရာတွင် လည်း တလမ်းသွားရိုးရိုးမဟုတ်ပဲ ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုးဖြင့် ဆက်ဆံလေ့ရှိလေသည်။
လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုတာ ဘာမှန်း ကောင်းကောင်းမသိသော ဝင့်ဝင့်ဖူးသည် ဦးဝင်းမောင်နှင့်တွေ့မှ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားရပီး ကာမဗေဒပညာရပ်တွင် တော်တော်များများ သိရှိနားလည်လာလေသည်။ သို့သော် ဦးဝင်းမောင်သည် ဆေးလိပ်ကို မကောင်းမှန်းသိသိဖြင့် နှစ်သက်စွာ သောက်သုံးလေသည်။ ရိုးရိုးစီးကရက်မှ တဆင့် တရုတ်ဆေးလိပ်ဖြစ်သော စီးရက်ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်လေးများကို ပြောင်းသောက် လေသည်။ အဆိုပါ စီးကရက်များတွင် ပရုပ်ပါသဖြင့် ပူရှိန်သောအရသာပါရလေသည်။ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးမှာ ဦးဝင်းမောင်တ ယောက် ပန်းညိုးလာခြင်းဖြစ်လေသည်။ အစပထမ၌ တာတာနာဖီးလ်ပါဝင်သော ယောက်ျားအားဆေးများ သုံးစွဲရာ အဆင်ပြေမှုရှိ သော်လည်း ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှု မလျော့သောအခါ လုံးဝ ပန်းသေသလိုဖြစ်သွားလေသည်။ ဆရာဝန်နှင့်ပြသရာတွင် ထိုအချိန် မှ ဦးဝင်းမောင်မှာ ဆေးလိပ်ကို လျော့သောက်ရင်းဖြတ်လေသည်။ လုံးဝပန်းသေသလိုဖြစ်သည်မှာ ခြောက်လခန့်ရှိပီဖြစ်ပီး ဝင့်ဝင့် ဖူးမှာ လိင်မဆက်ဆံရသည်မှာ ခြောက်လခန့်ရှိပီဖြစ်လေသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကတော့ ဇနီးဖြစ်သူ အသာပြေစေရန် လီးတုနဲ့ ထဲ့ပေး ပါသော်လည်း အစစ်လောက် မကောင်း ဆန္ဒရမက်ကို မပြေပျောက်စေနိုင်ကြောင်း ဝင့်ဝင့်ဖူးသာလျှင် ခံစားသိရှိပေသည်။ အခု ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အသိနှင့် ဆန္ဒလွန်ဆွဲနေမှုကို အလူးအလဲခံစားနေရလေသည်။
သားဖြစ်သူ စည်သူစိုး၏ အထောက် အပွတ်များတွင် သာယာစိတ်ကတဖက် လူ့ဘောင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသော သားနှင့်မအေ ကာမဆက်ဆံသော ဖောက်ပြန် မှုကြီးကို ကျူးလွန်ရန်မသင့်ဟူသော အသိတရားတို့ကတဖက် လွန်ဆွဲနေလေသည်။ ထိုကဲ့သို့လွန်ဆွဲကာ မသင့်တော်ဟု ကိုယ့်ကို ကိုယ်သတိပေးထိန်းချုပ်ပါသော်လည်း သွေးသားဆန္ဒဟူသည်ကား ထိန်းလေ လွတ်လေဖြစ်သော သဘာဝအတိုင်း ထူးခြားသော လိုလားတောင့်တခြင်း တမျိုးကလဲ ပေါက်ဖွားလာလေသည်။ ခိုးစားရသော အသီးက ပိုချိုသည်ဆိုသည့်အတိုင်း လူလောက အဖြူ ရောင်စည်းလေးကို ပါးပါးလေးဖြတ်ကျော်ကာ သားဖြစ်သူနှင့် ချစ်ပွဲဝင်ကြည့်လျှင် ကြုံတွေ့ရမည့် အပြာရောင် စိတ်လှုပ်ရှား စရာ ပျော်ရွင်မှု အထိအတွေ့ အရသာများ စိတ်ကျေနပ်စရာ ပြီးဆုံးမှု ခံစားချက်များကို တွေ့ကြုံခံစားလိုသော တောင့်တမှု ချဉ်ခြင်း လဲတက်လာလေသည်။ အစက ဒီလိုဘာလို့လုပ်သလဲ။ သူ့အဖေပန်းသေနေတာကို သိသွားလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် မိမိက သိန်းစိုးကို ရေလာမြောင်းပေးနေတာကိုသိသွားသလား။
ဒါမှမဟုတ် တကယ်ပဲမိမိကို ၅၂၈ထက်ပိုပီးချစ်လို့လား ဆိုသော အတွေးများဖြင့် စဉ်းစားခန်းဝင်မိသော်လည်း သွေးသား တောင်းဆိုမှုယင်းကပ်လာချိန်တွင် အပြာရောင်စိတ်ကူးများကလွဲ၍ ကျန်တာ အတွေးထဲ မ ဝင်တော့ချေ။ ထိုနေ့တနေ့လုံး ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးသည် စည်သူစိုးကိုရှောင်နေတော့လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အလုပ်ကိုလုပ်နေရ သော်လည်း စိတ်က သားဖြစ်သူ စည်သူစိုး အကြောင်းသာတွေးနေမိလေသည်။ စည်သူစိုး ထပ်လာမည်လားဟု မျှော်မိသော်လည်း စည်သူစိုးကို မတွေ့ရတော့ပေ။ ဦးဝင်းမောင်လည်း ထမင်းစား ပြန်ရောက်လာလေသည်။ ဒီတခါတွင်တော့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးသည် စည် သူစိုးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမည်ကို အပျို ဖြန်းလေးတစ်ဦးနှယ် ရှက်ရွံ့စိတ်လှုပ်ရှားနေလေသည်။ သို့သော် သူ၏ စိတ်ခံစားမှုများကို မပေါ်ပေါက်စေရန် မျက်နှာတင်းကာ ထိန်းချုပ်ထားလေသည်။ စည်သူစိုးမှာ ထမင်းစားရန် စားပွဲတွင် ထိုင်မိသောအခါ မိခင်ဖြစ် သူ၏ မျက်နှာထားကိုတွေ့ရသောအခါ လန့်သွားလေသည်။
အခြေအနေမှာ မိမိအတွက်ကောင်းနိုင်သော အလားအလာမရှိတော့ဟု မှတ်ချက်ပြု သုံးသပ်ကာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းသွားလေသည်။ သူကြိုးပမ်းစီစဉ်ထားသမျှ သဲထဲရေသွန် ဖြစ်တော့မည်ကို နှမြောမိ လေသည်။ သို့သော် တဆတ်ဆတ် တုန်နေသော မိခင်ဖြစ်သူ၏ ထမင်းပွဲခူးနေသည့် တုန်ယင်နေသော လက်အစုံကိုတွေ့ရ သောအခါ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပျော်ရွင်သွားလေသည်။ ဟန်ဆောင် မျက်နှာတင်းထားသော်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်ကို လက် တစုံက ဖော်ပြနေသည် မဟုတ်ပါလား။ ထိုကြောင့် တဆင့်ထပ်တက်ဖို့ စဉ်းစားမိလေသည်။ ထိုကြောင့် ထမင်းစားနေစဉ် ဖိနပ်ကို အသာချွတ်ကာ ခြေထောက်ဆန့်တန်းလျက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ မိခင်ဖြစ်သူ၏ ခြေကျင်းဝတ် ထမိန်ထဲသို့ မှန်း၍ သူ့ခြေထောက် တဖက်ကို ထဲ့လိုက်လေသည်။ ထိုင်ခုံချင်းလဲ နီးသဖြင့် ကွက်တိရောက်လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ ဘာများဖြစ်မလဲဟု ရင်ခုန် မျှော်လင့်နေစဉ် ရုတ်တရက် ရောက်လာသော ခြေထောက် တဖက်ကြောင့် လန့်ကာ အော်မိမတတ် ဖြစ်သွားသော်လည်း သတိ ချက်ချင်းဝင်ကာ ထိန်းလိုက်လေသည်။
စည်သူစိုး၏ ခြေထောက်က အတင့်ရဲစွာ အထက်သို့ တရွေ့ရွေ့တက်လာသဖြင့် ရှိမဲ့စုမဲ့ အသိတရားလေးဖြင့် ထိန်းကာ တက်လာနေသော ခြေထောက်ကို မိမိခြေနှစ်ဖက်ဖြင့် ညှပ်၍ ထိန်းလေသည်။ စည်သူစိုးက သူ့ ခြေထောက်ကို ရုန်းကာ အထက်သို့ တိုးလေရာ ပေါင်ခြံအတွင်းသို့ ရောက်လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ တခုခုကို မျှော်လင့်ထား သော်လည်း သည်လို အခြေအနေကိုယောင်လို့တောင်မှ အိပ်မက်ထဲထဲ့ မ မက်ဖူးပါချေ။ လင်ယောက်ျား တယောက်လုံးဘေးမှာ ငုတ်တုပ်ထားကာ သားအရင်းဖြစ်သူ၏ လက်ရဲဇက်ရဲ စောက်ပတ် အနိုက်ခံရသော ခံစားမှုမှာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးအတွက် ထမင်းစားရေသောက်လို နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ပါ။ စားပွဲခင်း အရှည်ဖြစ်ပီး ထိုင်နေသူ ရင်ဘတ်အောက်ပိုင်းကို ပဲ အချင်းချင်း မြင်ရသောကြောင့်သာ တော်တော့သည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အသံမထွက်မိအောင် သတိဖြင့်ထိန်း၍ အရေ တောက်တောက်ကျကာ ကာမဆိပ်များတက်လာလေသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကတော့ သတိပြုမိပုံမရ။
စည်သူစိုးက ပိုင်နိုင်စွာပင် ခြေ ချောင်ကလေးများဖြင့်ကလိပေးနေရာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ လင်မသိအောင် ခိုးစားရသော အရသာကို ခံစားရင်း အကောင်းကြီးကောင်း ကာ ပီးလုလုပင်ဖြစ်လာလေသည်။ ဒါကိုသတိထားမိသော စည်သူစိုးက ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်ပေးလေရာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အသံထွက်မညီးညူ မိစေရန် နှုတ်ခမ်းကိုက်အံကြိတ်ရင်း တချီပြည့်ပြည့်ဝဝပင်ပီးသွားလေသည်။ “ဖူး နေမကောင်းဘူးလား ထမင်းသိပ်မစားသလိုပဲ” “မဟုတ်ပါဘူး သိပ်မဆာသေးလို့ပါမောင်” “အင်း မောင်ဒီနေ့ စောစောပြန်သွားရမယ် ဟိုမှာ ဈေးဆိုင် နေတယ်” “ရတယ် စားပီးသွားတော့လေ မောင်ရဲ့” “အေးအေး သွားတော့မယ်” “သားမင်းလဲစားပီး ထားခဲ့လိုက်တော့ ဆိုင်ကို ဂရုစိုက် ဟို၂ကောင်နဲ့ လွှတ်မထားနဲ့ မေမေက သိပ်ကြည့်နိုင်တာမဟုတ်ဖူး” “ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေ” ဟုဆိုကာ စည်သူစိုးမှာ မသိချင် ယောင်ဆောင်ကာ ဆိုင်ရှေ့သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။
ထိုနေ့မှစ၍ စည်သူစိုးသည် နေ့တိုင်း ချက်ပြုတ်နေသော အချိန်တွင် ထောက် ပေးခြင်း၊ ထမင်းစားချိန်တိုင်း ခြေထောက်ဖြင့်ပီးအောင် ပွတ်ပေးခြင်းများကို အချိန်မှန်မှန် မပျက်မကွက် လုပ်ဆောင်ပေးလေ သည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အသစ်အဆန်း ကာမခံစားမှုများကို ခံစားနေရသောကြောင့် ဆာလောင်နေသော ရမ္မက်စိတ်များ ပြေပျောက်သလိုလိုရှိလေသည်။ တပတ်ပြည့်သောနေ့တွင် စည်သူစိုးသည် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးအား ရှောင်နေလေတော့သည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့် ဖူးမှာ ချက်ပြုတ်နေသောအချိန် စည်သူစိုး မလာသောအခါ “ဘာလုပ်ဦးမည်လဲ” ဟုတွေးက ရင်ခုန်မိလေသည်။ စည်သူစိုးကား ထမင်းစားချိန်တွင် ဦးဝင်းမောင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကာ ဘာမှမသိသလိုပင် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးအား လှည့်မျှပင် မကြည့်ပဲ ထမင်းကို ခပ်သွက်သွက်စားကာ ထွက်သွားလေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ စောင့်မျှော်နေသော်လည်း စည်သူစိုးမှာ လုံးဝရှောင်နေတော့လေ သည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူမှာ စိတ်ထဲတွင် မရိုးမယွ ဖြစ်လာလေသည်။ တခုခုလိုအပ်နေသလိုလို လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလို ဝေဒနာတ ရပ်ကိုလဲ ခံစားရလေသည်။သုံးရက်မြောက်သောနေ့ ချက်ပြုတ်နေသော အချိန်တွင် “သားရေ သား ခနလောက်လာပါဦး” ဟု အော်ခေါ်လိုက်လေသည်။
စည်သူစိုးလဲ ဆိုင်လူရှင်းနေသည်မို့ ကြည့်နေသော အောကားကို ပိတ်ကာ အမေဘာများ ဖြစ်လိုလဲ ဟူသော အတွေးဖြင့် နောက်ဖေးမီးဖိုခန်းသို့ ဝင်လာခဲ့လေသည်။ အောက်က ညီတော်မောင်က ဒေါသကြီးကာ ခေါင်းတထောင် ထောင်နှင့်။ မီးဖိုခန်းရောက်သောအခါ စည်သူစိုး ခနငေးမောသွားရလေသည်။ ခဲရောင် အင်္ကျီလက်ပြတ်လေးနှင့် ချည်သား ဘောင်းဘီအပွ အနက်ရောင်ကို ဝတ်ဆင်ထားသော အမေမှာ Apronသာ ဖယ်လိုက်ပါက စတိုင်ကျကျမိုက်သွားမည်မှာ သေချာလှ ပါသည်။ နှုတ်ခမ်းမှာလည်း ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့လေးဆိုထားသဖြင့် စိုလက်ကာ မြင်ရသော သူ့ရင်ကို ဗလောင်ဆူစေပါသည်။ အ မေက နူးညံ့သော အပြုံးလေးပြုံးလျက် “သားက ဒီရက်ပိုင်း အမေ့ကို ရှောင်ဖယ် ရှောင်ဖယ် လုပ်နေတာ စိတ်ဆိုးနေလို့လားကွယ်” “မဆိုးပါဘူး အမေရဲ့ သားက အမေ့ကို ဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲ”
“မသိဘူးလေ အမေ့နားတောင် မလာတော့ဘူး ဆိုတော့ စိတ်များဆိုးသလားလို့ပါ” “မဆိုးပါဘူး အမရေဲ့” ဟု ပြောပြောဆိုဆို အလှကြီးလှနေသော အမေ့အား ရင်ခွင်ထဲဆွဲ၍ ဖက်လိုက် လေသည်။ သူ၏ ပုဆိုးအောက်မှ မာတောင်နေသော ညီတော်မောင်က အမေ့ ဆီးခုံကို ဝင်ဆောင့်ကာ အလျားလိုက် ကပ်နေလေ သည်။ အမေ့ မျက်လုံးလေးများ မှေးခနဲ့ ကျ၍ သွာပြီး ချက်ခြင်း ပြန်ပွင့်လာလေသည်။ သူက အမေ့ ပါးပြင်နှင့် မျက်နှာတစ်ခုလုံး အနှံ့ နမ်းလိုက်လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ စည်သူစိုး ခါးကို ပြန်ဖက်ထားကာ သားဖြစ်သူ အနမ်းမိုးရွာခြင်းကို ကြည်နူးစွာခံယူနေ လေသည်။ နမ်းလို့ အားရသွားမှ စည်သူစိုးက သူ့မျက်နှာကိုရော လက်တွေကိုပါ ခွာလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုး၏ လက်တွေက ခွာ သွားပေမယ့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက စည်သူစိုးကို ဖက်ထားမြဲ ဖက်ထားလျက် ရှိလေသည်။
ထို့ကြောင့် စည်သူစိုးက အမေ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ အမေကက ရုတ်တရက် သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများနှင့် သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေပေါ် သို့ ဖိကပ်ကာ ခပ်မြှင်းမြှင်းလေး စုပ်နမ်းလိုက်လေသည်။ ခဏအတွင်းမှာပင် ပြန်၍ခွာလိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ် မှ လက်များကိုပါ ဖယ် ခွာကာ “သား ဆိုင်သွားကြည့်တော့နော်” ဟု ပြုံးစစ မျက်နှာနှင့် ပြောကာ မျက်လုံးလေးတဖက်ကို မှိတ်ပြလိုက်လေသည်။ စည်သူ စိုးမှာ ရင်ဒိန်းဒိန်းခုန်ကာ မယုံချင်ပေမဲ့လဲ အပျော်ကြီးပျော်ကာ “ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေ” ဟု ပြောကာ ဆိုင်ခန်းဆီသို့ ထွက်လာခဲ့လေ သည်။ ထမင်းစားချိန်ရောက်သောအခါ စည်သူစိုးက ခြေထောက်ဖြင့် ပွတ်ပေးသောအခါ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက ညုတုတု အကြည့်ဖြင့် ကြည်ကာ သူ့ပေါင်ကြားဆီသို့ ခြေထောက်ဖြင့် သူ့ညီတော်မောင်ကို ပြန်ပွတ်ပေးလေသည်။ သို့သော် အကြံသမားစည်သူစိုးက ဒေါ် ဝင့်ဝင့်ဖူး ပြီးခါနီးအချိန်တွင် ခြေထောက်ကို သိမ်းကာ ထမင်းဝိုင်းမှ ထသွားလေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ မချင်မရဲဖြစ်ကာ ဆတ်တငံ့ငံ့ဖြင့် ကျန်နေခဲ့လေသည်။ ဦးဝင်းမောင် ပြန်ထွက်သွားသောအခါ စည်သူစိုးကြောင့် ဆတ်တငံ့ငံ့ဖြစ်ကာ အဆက်ပြတ်ခဲ့သော ကာမပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်းရန် အခန်းထဲသို့ဝင်ကာ ကုတင်ပေါ်လှဲ၍ ကိုယ့်အစိကိုပြန် ပွတ်လေသည်။ စည်သူစိုးသည် အဖေထွက်သွားသောအခါ အမေ ဘာလုပ်မလဲ သိချင်သောကြောင့် အမေရှိရာသို့ ထွက်လာခဲ့လေ သည်။ “ဟင်း… ဟင်း …အဟင်း……ဟင်း…” အမေ့ အခန်းတွင်းမှ ညီးသံများကြားရသောအခါ စည်သူစိုး တယောက် လေချွန် လိုက်လေသည်။ ဒီလို အခြေအနေရောက်အောင် သေချာ အကွက်ရွေ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အခန်းတံခါး အသာဟကြည့်တော့ ထင်သည့်အတိုင်း အမေ တယောက် မိမွေးတိုင်း ဖမွေတိုင်းဖြင့် တီဆားပက်ထားသလို ထွန့်ထွန့်လူးကာ ကိုယ့်အစိကို ပွတ်ရင်း လောကကြီးနှင့် ခဏ အဆက်ပြတ်ကာ အကောင်းကြီးကောင်း နေလေသည်။
စည်သူစိုးက ဝတ်ထားသော ပုဆိုးကိုချွတ်၍ ခုတင် ပေါ်ကန့်လန့်လှဲပီး ပေါင်၂ဖက်ကားလျက် ကိုယ့်ဟာကိုပွတ်ကာ အကောင်းကြီး ကောင်းနေသော အမေဖြစ်သူ ပေါင်ကြားသို့ မျက်နှာ အပ်ကာ ပွတ်နေသော လက်ကိုဖယ်၍ အစိကို စုပ်လိုက်လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ ရုတ်တရက် လက်စွဲဖယ်ခံလိုက်ရသောအခါ လန့်သွားလေသည်။ သို့သော် သန်မာသော လက်တစုံက ပေါင်၂ချောင်းကို ကိုင်ကာ နူးညံ့သော နှုတ်ခမ်းတစုံက မိမိ အစိကို လာစုပ် သောအခါ အိပ်ခန်းထဲ လာပြီး သူမကို လက်ရဲဇက်ရဲ ဘာဂျာပေးနေသူမှာ သားဖြစ်သူ စည်သူမှတပါး မည်သူမှမဖြစ်နိုင်ဟု တွေးမိ သောအခါ အလိုက်သင့်လေး သားဖြစ်သူပေးသောအရသာများကို ခံယူနေလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးမှာလည်း ပြတ်လပ်နေသော အမေဖြစ်သူကို သားကောင်းတယောက်ပီသစွာ ပြုစုရန် အပီအပြင် ယက်လေတော့သည်။
”အိုး အို အ၊ အ အ အ ဟားးးးးးး ရှီးးးးးဟီးးးးးဟီးးးးးးးဟီးးးးးးးးးး အငှ့ ဟားးးးးးးးးးး ” ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးရဲ့ ညီးညူ သံလေးများ အခန်းထဲ မှာ ထွက်ပေါ်နေလေတော့သည်။ ငါးမိနစ်ခန့်ကြာသောအခါ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး တကိုယ်လိုး တွန့်လိမ်ကာ စည်သူစိုးခေါင်းကို လက်၂ဖက်ဖြင့် ဖိကာကိုင်ရင်း ကာမလမ်းဆုံးသို့ ရောက်ရှိကာ ပြီးသွားလေတော့သည်။ ပြီးသည့်နောက် စည်သူစိုးက ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ပေါင်ကို ကားပြီးဒူးနှစ်ဖက်ကိုထောင်လိုက်သည်။ ထို့နောက်သူရဲ့လီးကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး အမေ့စောက်ပတ်အဝမှာတေ့လိုက်ချိန်တွင် “ကိုစိုးရေ ကိုစိုး ဒီမှာ ရွှေလာစစ်ပေးပါဦး” ဟူသော သိန်းစိုး ခေါ်သံကို ကြားလိုက်ရလေသည်။ တော်သေးသည် သိန်းစိုးက အိမ် အဝင်ပေါက်နားကနေ အော်ခေါ်နေလို့။ “အေး လာပြီဟေ့ လာပြီ” ဟု ပြန်အော်ကာ ပုဆိုးကောက်ဝတ်ရင်း အရေးကောင်း ဒိန်း ဒေါင်းဖျက်သော ရွှေပေါင်သူအား စိတ်ထဲမှကျိတ် ကျိန်ဆဲမိလေသည်။ “မာ့မီ သာသားတို ညကျတွေ့မယ်နော် ဒယ်ဒီအိပ်ရင် သား ဆီလာခဲ့ပေးပါနာ် မျှော်နေမယ်” “လာခဲ့မှာပေါ့ ကလေးရယ်” ပြောပြောဆိုဆို အမေ့နှုတ်ခမ်းလေးအား နှုတ်ဆက်အနမ်းပေးရင်း ဆိုင်ရှေ့သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။
လျှာပေါ်မှာကတော့ အမေ့ စောက်ရေ အရသာကား စိမ့်စိမ့်လေးနှင့် နှခေါင်းထဲမှာ မွှေးမွှေးလေး သင့်ပျံ့နေပါတော့သည်။ ည ၁၁နာရီခွဲ အချိန်တွင် စည်သူစိုး နိုးလာခဲ့လေသည်။ ညကအိပ်ယာစောစောဝင်ခဲ့သည်က ယခုတရေးရခဲ့ ချေပြီ။ လိင်မဆက်ဆံခင် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု လုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အနံ့ဆိုးများ မရှိအောင် သန့်ရှင်းတာက ကိုယ့်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံ ဖော်ကို အဆင်ပြေစေရုံသာမက ဆက်ဆံရတာ ပိုပြီး ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ် ဟူသော နောင်တော်ကြီးများညွန်ကြား ချက်အတိုင်း ကိုယ်လက်သုတ်သင်ကာ ပြီးသည့်နောက် အမေ့အခန်းဘက်သို့ ထွက်လာခဲ့လေသည်။ အမေ့ အခန်းတံခါး အသာဟ ကြည့်တော့ အမေက နိုးကာ ထိုင်နေသည်။ ခနအကြာ အမေက ထလာပြီး အခန်းတံခါးဆီသို့ လျှောက်လာလေသည်။ အမထွက် လာသောအခါ သူက ဆီးကြို၍ဖက်ကာ ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပြီး အမေ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို စုတ်နမ်းလိုက်လေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ သာဖြစ်သူဆီ သွားရန် အခန်းတံခါးဖွင့် အထွက်တွင် ရုတ်တရက်ဆွဲဖက်ပြီး အနမ်းခံရသောအခါ လန့်ကာ အော်မိ သော်လည်း အသံမထွက်တော့ပါ။ စည်သူစိုးက သူ့နှုတ်ခမ်းတခုလုံး စုတ်နမ်းနေပြီ ဖြစ်လေသည်။ သူကလဲ အငမ်းမရ ပြန်နမ်းမိ လေသည်။ “ဗြွတ် ! ! ! “ အနမ်းရှည်ကြီး ဆုံးသောအခါ စည်သူစိုးက သူအား အခန်းထဲသို့ ပွေ့ချီကာ ခေါ်သွားလေသည်။ အခန်းထဲ ရောက်သောအခါ မွတ်သိပ်ပြင်းပြလွန်းသော အနမ်းမိုးများရွာလေတော့သည်။ နှုတ်ခမ်းချင်း လျှာချင်း အတင်း တိုးထိပွတ်သပ်ကာ မက်မက်မောမော နမ်းလို့ မဝနိုင်ပဲ နောက်မတွေ့ရမည်ကဲ့သို့ သူ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တအားဖက်ထားသလို သူကလည်း စည်သူစိုး ကို တအား ပြန်ဖက်ထားလေသည်။ စည်သူစိုးက နမ်းလျက်ပင် သူ့အင်္ကျီကိုချွတ်လေရာ သူကလည်း စည်သူစိုး အင်္ကျီကိုပြန် ချွတ်ပေးလေသည်။
၂ယောက်သား ကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်တမျှင်မှမရှိပဲ တုံးလုံးဖြစ်သွားသောအခါ စည်သူစိုးက တွန်းလှဲလိုက်လေ သည်။ ထိုနောက် အပေါ်မှတက်ခွကာ သူ၏နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးအား ဖိကပ်ကာ စုတ်နမ်းပါတော့သည်။ စည်သူစိုး လက်နှစ်ဖက်က လက်ညိုးနှင့်လက်မသုံးကာ နို့သီးခေါင်းလေးများ ချေပေးနေပြီး သူ့နို့၂လုံးအား အုပ်ကိုင်ထားလေသည်။ သူ့ခြေထောက်များက လည်း စည်သူစိုးခါးအား ညှပ်ကာ စည်သူစိုးလီကြီးက သူ၏ စောက်ပတ်ပေါ်တွင် အပြားလိုက် ကပ်နေလေသည်။ စည်သူစိုးက ခါး ကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်လေရာ စောက်စိမှစ၍ စောက်ပတ်ကွဲကြောင်းအတိုင်း လီးကြီးက လွှတိုက်နေလေသည်။ ထိုအတိုင်းခန ကြာသောအခါ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ တဏှာစိတ်များကြွသထက်ကြွကာ ရာဂမီးလျှံများ လောင်မြိုက်လျက် စည်သူစိုးကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်တွယ်ကာ စောက်ပတ်ထဲမှလည်း အရေများ ပွက်ခနဲ့ ပွက်ခနဲ့ထွက်လာလေသည်။
ထိုအခါ စည်သူစိုးက နမ်းနေရာမှ ခွာ၍ နို့များကို ပြောင်းစို့လေသည်။ နို့တလုံးကိုစို့နေချိန်တွင် လက်တဖက်က နို့တလုံးကိုချေပေး နေကာ ကျန်လက်တဖက်၏ လက်ညိုးနှင့် လက်ခလယ်၂ချောင်းပူးကာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ ပါးစပ်ထဲသို့ ထဲ့ပေးလေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး မှာ ပို၍ စိတ်ကြွလာကာ စည်သူစိုးလက်နှစ်ချောင်းအား အားရပါးရစုတ်လေတော့သည်။ အတန်ကြာ နို့စို့ပြီးသောအခါ စည်သူစိုး က လျှာကိုခပ်တောင့်တောင့်လေးလုပ်ကာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရင်ညွန့်မှ ဆီးစပ်သို့ ဆွဲချကာ ယက်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် အရေရွဲရွဲစို နေသော ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး စောက်ပတ်ကို လျှာဖြင့်အပြားလိုက်ယက်ပါတော့သည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ တင်းမထားနိုင်တော့ပဲ တချီပြီး သွားလေသည်။ စည်သူစိုးက မရပ်ပဲ စောက်စိကို သရက်စေ့စုပ်သလိုစုပ်ကာ လက်၂ဖက်က ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ နို့သီးခေါင်းလေး၂လုံး ကို ချေပေးလေရာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ ညီးသံလေးများပေးကာ ကာမစိတ်များပြန်ကြွလာလေသည်။
“ဟင်းးး အင်းးး ဟင်းးး ဟင်းး” စောက်ပတ်မှာလဲ အရေများလိုက်ကာ စိုရွဲလာလေသည်။ စည်သူစိုး အခြေအနေကို အကဲခတ်နေသူဖြစ်ရာ ဒီအချိန်သည် လိုးရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိကာ စောက်စိစုပ်နေခြင်းကို ရပ်လိုက်လေသည်။ “ဟင်း အင်း ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ ဆက်စုပ်ပေးပါ သားရယ်” “မေ့မေ့ကို ချစ်မလို့ပါ မေမေ” ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် စည်သူစိုးက ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ပေါင်ကြားတွင် နေရာယူ ကာ သူ့လီးကြီးနှင့် စောက်ပတ်ဝကို တေ့လိုက်လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး စောက်ပတ်ကြီးမှာ လီးအထိအတွေ့ကို ခံစားသိရှိသည့် အလား ခုံးထလာလေသည်။ စောက်ပတ်အတွင်းထဲမှလည်း တစုံတခုကို တောင့်တသည့်အလား အတွင်းသားများက တဆစ်ဆစ် နှင့် ရှုံ့ချီပွချီ ဖြစ်လာလေသည်။ စည်သူစိုးက ခါးတလှုပ်လှုပ်ဖြင့် နှဲ့ကာ ဖြေဖြေချင်းသွင်းလေတော့သည်။ “အား ကျွတ် ကျွတ် သား ဖြေးဖြေးနော်” “ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေ” ဟုဆိုကာ သွင်းရင်းဖြင့် အဆုံးထိဝင်သွားလေသည်။ စည်သူစိုးက အထုတ်အသွင်း ဖြေးဖြေး ခြင်း လုပ်ကာ လိုးပါတော့သည်။ အချက်၂၀ကျော်သောအခါ “သား မြန်မြန်ဆောင့်ပါတော့ အမေခံနိုင်ပြီ” ဟုဆိုသဖြင့် စည်သူစိုး က စက်သေနတ်ပစ်သလို အသားကုန်ဆောင့်လိုးလေတော့သည်။
ထိုသို့ လိုးနေရင်းစည်သူစိုးက “မေမေ သားလိုးတာ ခံလို့ ကောင်းလား” “ဘာတွေပြောနေတာလဲသားရယ်ဆောင့်မှာသာ ဆောင့်စမ်းပါ” “ပြောပြပါ မေမေရာ သားက ကြားချင်လို့ပါ မေမေ မဖြေရင် မဆောင့်တော့ဘူး” ဟု ပြောပြောဆိုဆို ဆောင့်ချက်ကို လျော့ချလိုက်လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ စည်သူစိုး၏ ညစ်ကျယ်ကျယ် လုပ်ပုံကို သဘောကျကာ “ကောင်းတယ်စည်သူရယ်ကောင်းတယ် သားလီးက မင်းအဖေထက်ကြီးတော့ ခံလို့ အရမ်းကောင်းတယ်မင်းအဖေထက်သာအောင် လိုးပြစမ်းသားလေး မင်းအဖေ ကျယ်အောင် လိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ မေမေ စောက်ပတ်ကို မင်းလီးကြီးနဲ့ လိုးလိုက်စမ်း” ဟု ပိုပိုသာသာ တမင် စိတ်ကြွအောင် ပြောလိုက်လေသည်။ ထိုသို့ ပြောပြီးနောက် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ စောက်ပတ်ထဲမှ အရေများပိုလိုက်လာလေသည်။ စည်သူစိုးမှာ အမေ့ စကားကြားပြီး စိတ်ကြွသွားကာ မီးကုန်ယမ်းကုန်လိုးပါ တော့သည်။ ခနကြာသောအခါ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး တကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ စည်သူစိုးကို တင်းကျပ်စွာဖက်ကာ ပြီးသွားလေ သည်။
တချိန်မှာပင် စည်သူစိုး လီးထဲမှ သုတ်ရည်များကလည်း ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး စောက်ပတ်ထဲသို့ အရှိန်ပြင်းစွာ ပန်းထွက်သွားလေ သည်။ ထိုညမှစကာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးသည် ညတိုင်း ဦးဝင်းမောင်အိပ်ချိန်တွင် စည်သူစိုးနဲ့ လိုးလေတော့သည်။ သို့သော် အခါ တစ်ည သောအခါဝယ် ဦးဝင်းမောင် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်နေရာမှ လန့်နိုးလာလေသည်။ ဘေးမှ မိန်းမဖြစ်သူကို ကြည့်တော့လဲ မရှိ။ အပေါ့အပါးသွားနေသည် ဖြစ်တန်ရာ သူလဲ အပေါ့အပါးသွားရန် အိပ်ယာထကာ အခန်းထဲမှထွက်လာလေသည်။ အခန်းအပြင် ရောက်သော် ညီးညူ သံတခုကို သားတော်မောင် အခန်းဆီမှ ကြားရလေသည်။ ဘာများဖြစ်နေလဲ ဟူသော စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် အခန်း ဆီသို့ လာချိန်တွင် “အား အ ကောင်းလိုက်တာသားရယ်” ဆိုသော စကားသံများကြောင့် ခြေလှမ်းတုံ့သွားလေသည်။ ခြေသံမ ကြားအောင် အသာသွား၍ စည်သူစိုးအခန်းတံခါး အသာဟကြည့်လေသော် ဦးဝင်းမောင် ပါးစပ် အဟောင်းသား ဖြစ်သွားလေ သည်။ မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကား ဝင့်ဝင့်ဖူးက လေးဖက်ထောက်လျက် ခုတင်ပေါ်မှာ စည်သူစိုးက နောက်က ဝင့်ဝင့်ဖူး စောက် ပတ်ထဲ လီးသွင်းကာ လိုးနေသော မြင်ကွင်းပင်။
မြင်နေရသော အခြေအနေသည်ဦးဝင်းမောင်၏သွေးသားများကိုထူးထူးခြားခြား ပင် လှုပ်ရှားသွားစေလေသည်။မယုံနိုင် အံ့အားသင့်သောစိတ်တို့ကလွမ်းမိုးနေသဖြင့်ထိုသို့သွေးသားတွေလှုပ်ရှားသွားမှုကိုဦးဝင်း မောင်သတိမထားမချေ။ အမေနှင့် သားလိုးနေသော အခြေအနေကို ဦးဝင်းမောင် ဘယ်တုန်းကမှယောင်လို့တောင် မစဉ်းစားမိခဲ့ ချေ။ ခုတော့ဘာလုပ်ရမည်ကို မသိတော့ချေ။ “ကောင်းတယ် သားလေး လိုးစမ်းအမေ့ကို” ဦးဘမောင် ခေါင်းကျိန်းလေပြီ။ အဝေးသို့ထွက်ပြေးလိုက်ချင်သည်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားသောခံစားမှုတခုကဆွဲငင်ထားသလို ဖြစ်နေလေသည်။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ မိန်းမ ဖြစ်သူက တခြားသော ယောက်ျားတယောက်နှင့်လိုးနေကာ လိုးနေသူကလည်း ကိုယ့်သားအရင်းဖြစ်နေသော အခြေအနေမှာ သမ ရိုးကျ အခြေအနေမဟုတ်ပါ။ သူတို့ ၂ယောက်ကြည့်ရသည်မှာ လိုးနေတာကြာပြီဖြစ်လောက်လေသည်။
” တောက်” ဦးဝင်းမောင် ဒေါသတွေ တရိပ်ရိပ်ထွက်လာလေသည်။ တခြားတဖက်တွင်လည်း ကာမရမ္မက်များထူးခြားစွာ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်နိုးကြားလာလေသည်။အသိစိတ်ကမိန်းမနှင့် သားလုပ်သူတို့၏ လူ့ဘောင်အပြင်ဘက်က ဖောက်ပြန်မှုကိုဒေါသ ထွက်နေသည်။ မသိစိတ်က လိုးပွဲကြည့်ရင်း ရာဂစိတ်များ နိုးကြားနေလေသည်။ ထိုကာမရမ္မက်စိတ်၏စေ့ဆော်မှုကြောင့်ပင်ဦးဘ မောင် လီးကြီး တောင်မှန်းမသိ တောင်လာလေသည်။ဒေါသအချောင်းချောင်းထွက်နေသော ဦးဝင်းမောင်သူ့လီးကြီးတောင်လို့ တောင်နေမှန်းမသိသေးပါ။ မသိစိတ်ထဲကရာဂဇောဖြင့် သားနှင့် မိန်းမဖြစ်သူလိုးပွဲကို ကြည့်ရင်း လီးကြီးကိုအလိုလိုဆုပ်ကိုင်မိကာ ဂွင်းထုမိသည့် အခြေအနေသို့ဟရောက်မှန်းမသိရောက်သွားလေသည်။ ပုဆိုးကိုစလွယ်သိုင်းကာ လီးချောင်းကြီးကို အပီ အပြင်ဆုပ်ကိုင်ပြီးဂွင်းနာနာထုနေမိလေသည်။ စည်သူစိုး ဆောင့်လိုက်တိုင်း တုန်ခါသွားသော ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ ဖင်ဖြူ ဖြူ ကြီးများ ကိုကြည့်ကာ ဂွင်းထုချက်ပိုပြင်းလာကာနောက်ဆုံးတော့သုတ်ရည်တွေအောက်ခံဘောင်းဘီထဲသို့ ပန်းချမိလေသည်။ မိမိမှာ လီး ပြန်တောင်လာသည်ကို သတိပြုမိကာ ဦးဝင်းမောင် ဝမ်းသာသွားလေသည်။
ယောက်ျားတယောက်အဖို့ လီးမတောင်နိုင်ခြင်းမှာ ရှင် လျက်နှင့် သေခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ အိပ် စား လိုး ဟူသော အရာသုံးပါး၌ တခုခုဆုံးရှုံးရလျှင် ဘဝပျော်ရွှင်မှု ဆိတ်သုန်းရခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ ဦးဝင်းမောင်မှာ အပျော်ကြီးပျော်ကာ သားဖြစ်သူနှင့် မိန်းမဖြစ်သူကို အပြစ်မမြင်တော့ပဲ ကျေးဇူးတင်မိလေသည်။ ထိုအပြင် သည်လိုချောင်းကြည့်ရသည့် ခံစားမှုမျိုးနှင့် ကိုယ့်မိန်းမ၏ ဖုံးကွယ်ထားသော ကာမခံစားမှုများကို မြင်ရသော အခြေအနေကို သဘောကျ နှစ်ခြိုက်မိကြောင်း သတိပြုမိလေသည်။ အစထဲက ပွင့်လင်းသူပီပီ သားဖြစ်သူနှင့် ၂ယောက်ညှပ်ကာ ဝင့်ဝင့်ဖူးကို လိုးလျှင် ဘယ်လိုနေမလဲ ဟူသော အတွေးတို့လည်း ဝင်ရောက်လာလေသည်။ ထိုကြောင့် ရေအမြန်ဆေးကာ မိမိ အခန်းဆီသို့ ပြန်၍ အိပ်နေလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးနှင့် ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ လိုးပွဲကြီးက အရှိန်မသေသေးပဲ ဆက်လက် ကပြလျက်ရှိ လေတော့သည်။
“ဖူးရေ” “ရှင် မောင်ပြောလေ ဘာလုပ်ချင်လို့လဲ” “အခန်းထဲသွားရအောင်” “ဟုတ် လာပါပြီ” စည်သူစိုး ရှေ့တွင် သေချာ ဝင့်ဝင့် ဖူးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောကာ ခေါ်ခဲ့လေသည်။ စည်သူစိုးမှာ ဖခင်ဖြစ်သူ၏ ထူးဆန်းသော အပြုအမူကြောင့် တခုခုတော့ တခုခုပဲ ဟုအတွေးဝင်ကာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဗျာများနေမိလေသည်။ သူနှင့် အမေ့ကိစ္စကို အဖေသိပါက မိုးမီးလောင်တာထက်ဆိုးမည် ဖြစ်ကြောင်း တွေးမိကာ စိုးရိမ်စိတ်တို့ဖြင့် ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေလေသည်။ အတန်ကြာ စောင့်ကြည့်သော်လည်း ပြန်ထွက်မလာသဖြင့် အဖေတို့အခန်းဆီသို့ သွားကာ ချောင်းကြည့်လေသည်။ အခန်းကမြင်ကွင်းကိုတွေ့သောအခါ စည်သူစိုးမှာ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ရ လေသည်။ မြင်ကွင်းကား အဖေက အမေ့ကို ခုတင်ပေါ်လေးဖက်ထောက်ကာ နောက်မှ လိုးနေသော မြင်ကွင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ ဝမ်းသာစရာ အချက်ကား ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဝင်မောင် လီးပြန်တောင်လာခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ တဆက်ထဲမှာပင် အမေနှင့် လိုးချင်မှ လိုးရတော့မည်ဟူသော အသိကလဲ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလှပါတော့သည်။
“အား အ အ ထွက်ကုန်ပြီ မောင်ရဲ့ ပြီးသွားပြီမောင်” “အား ကောင်းလိုက်တာ ဖူးရာ ဖူး ဖူး” ဟူသော ရေရွှတ်မြည်တမ်းသံများနှင့်အတူ ဦးဝင်းမောင်နှင့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးတို့ ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့်ပြီးသွားလေသည်။ “မောင် ဘာဆေးတွေသောက်လိုက်လို့ လီးပြန်တောင်လာတလဲဟင်” “ဘာဆေးမှမသောက်ဘူး မင်းနဲ့ သားနဲ့ လိုးတာကြည့်ပြီး လီးတောင်လာတာဟေ့” “ရှင်” “ခုမှ ရှင်မနေနဲ့ ဟိုတံခါးပေါက်က ချောင်းကြည့်နေတဲ့ ကောင်လဲ လာခဲ့ ငါအကုန်သိပြီးပြီ ငါတို့မိသားစု သွေးမကွဲပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြမယ် အဲ့ဒါကို မင်းတို့သဘောတူလား ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ မောင် အကုန်ခွင့်လွှတ်တယ်” ဦးဝင်းမောင်မှာ ဝေ့ဝိုက်မနေပဲ ဒဲ့ အပေါ်ဆီးကနေ ပြောကာ အမှတ်ယူလိုက်လေသည်။ မထူးလဲ တားမရမည့် အတူတူ မိသားစု သာယာရေးကို ရှေ့ရှုကာ နားလည်မှုယူလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးမှာလည်း အဖေနှင့်ပေါင်းကာ လိုးပွဲကြီးဆင်နွဲရမည့် အသိကြောင့် ရင်ခုန်နှုန်းမြန်ကာ လီးကြီးတထောင်ထောင်နှင့် အခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာလေသည်။ “လာ သား မင်းမေမေကို ဖေ့ဖေ့ရှေ့မှာ အပြတ်လိုးပြစမ်း” “ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေ” ဟုပြောရင်း အမေ့ပေါင်ကြားတွင် နေရာယူကာ လီး ကြီးကို စောက်ပတ်ဝမှာတေ့ကာ စိန်စီနန်းရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းကို ဆက်လက် ကပြတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြရင်း နားပါရစေ တော့ခင်ဗျာ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged စိနျစီနနျး က ခဈြဇာတျလမျး